(No. 59 , September 22, 2020)
၁။ RCSS ဖမ်းထားသူ လွှတ်ပေးဖို့ တအာင်းပါတီ တောင်းဆို
၂။ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကျယ်ပြန့်သည့် ပါဝင်မှုဖြင့် လေးနက်စွာလုပ်ဆောင်ရန် KNU တိုက်တွန်း
၃။ ကျောက်တော်၊ကျေးရွာ ၂ ခု မီးရှို့ ခံရမှုတွင် ယမ်းထုပ်များနှင့် ယူနီဖောင်းများ သိမ်း ဆည်းရထားဟု AHRDPA ပြော
၄။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်သည် KNU မူဝါဒနှင့် သွေဖည်နေပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်တည့်မတ်ဖို့လိုအပ်ဟု KNU Concerned Group ပြော
၅။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေးမြို့နယ် ငါးမျှားစခန်းတွင် ငါးလှန်းစင်များနှင့် နေအိမ်အချို့ပျက်စီး
၆။ ဖာပွန်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ကြီးစိုးသည့် အစဉ်အလာကို ထိုးဖောက်မည်ဟု KNDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ပြော
၇။ သီပေါ ကျားဖြူ ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရ
၈။ ကရင်နီလူငယ်အင်အားစုများက ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်းရံ၍ ရှားတောမြို့ နယ် ကျေးရွာများ၌ မဲဆွယ်စည်းရုံး
၉။ တောင်ကြီးမြို့ ပြည်တွင်းစစ် ဆန့်ကျင်ကြ Photo Campaing ပြုလုပ်
၁၀။ ပြည်တွင်းစစ်များ ရပ်တန့်ရန် ကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တောင်းဆို
၁၁။ ကျိုက်မရောမြို့နယ် NLD ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးသူ ကြေအေးတောင်းပန်ခြင်းမပြုသဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူ
၁၂။ မိုင်းလားမြို့မှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၆၀)ကျော် တောင်ကြီးရောက်
၁၃။ မွန်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်အပြင် ရန်ကုန် ဧရာဝတီ တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် မွန်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်
၁၄။ သျှမ်းမြောက် သတ်ဖြတ်ခံရသည့် အရပ်သားများအတွက် အမှုမှန် မဖြစ်သေး
၁၅။ ကေအဲန်ယူ သထုံခရိုင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဂိတ်ဖွင့်လှစ်မှုအပေါ် အစိုးရတပ်ဟန့်တား
၁၆။ မယ်စဲ့တွင် မဲဆွယ်ပွဲ ရက်တိုက်နေကြောင်း NLD တင်ပြမှုကြောင့် ကော်မရှင်က ရက်များ ပြောင်းလဲ
၁၇။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်း ညောင်ချောင်းအနီး မေယုတောင်ကျော်လမ်းတွင် ၂ ရက်ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဖြစ်
၁၈။ ကိုဗစ်ကာလ သျှမ်းမြောက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှု မြင့်တက် HST-NSS ထောက်ပြ
၁၉။ နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ခွဲ ဥက္ကဌ အိမ်တွင် လက်ပစ်ဗုံးတလုံး ထပ်တွေ့
၂၀။ မော်လမြိုင် အမှတ်(၁)ဈေးကြီးတွင် ပိတ်ထားသည့်ဆိုင်ခန်းပစ္စည်းများ ယာယီထုတ်ယူခွင့်ပြု
၂၁။ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရန် ကရင်နီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံးတိုက်တွန်း
၂၂။ မြောက်ဦးတွင် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ဒေသခံတစ်ဦးဒဏ်ရာရ၊ တစ်ဦးမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရ
၂၃။ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ကူးစက်မူမရှိစေရန်မဲရုံတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်နေဟုဆို
၂၄။ စစ်ရှောင်အသစ် တစ်ထောင်ခန့် အကူအညီများ လိုအပ်
၂၅။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၂ ပါတီ ရှိသည့်အနက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီ သုံးပါတီသာရှိ
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ခေးအုံအွေ့ကျေးရွာအုပ်စု ဒေသခံ မိုင်းလှစိန်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါ တယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားတာလို့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းနုမ်ဟန်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပန်မွမ်းရွာကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ မှိုရှာဖို့ တောထဲ သွားတဲ့ မိုင်းလှစိန်ကို ရွာအပြင်လမ်းမှာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေကတော့ တောထဲမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ မိုင်းလှစိန်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုင်းလှစိန်ကို သံသယရှိလို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာမှာ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရလို့ ထိန်းသိမ်းထားတာလို့ RCSS ပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအွမ်ခေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။ သူ့ကို ဘယ်တော့ပြန်လွှတ်မလဲလို့ မေးမြန်းရာမှာတော့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု အခြေအနေ စစ်ဆေးချက်အရ ထွက်လာတဲ့ အဖြေအပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုင်းလှစိန်ဟာ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါတီဝင်ဟောင်းတစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တအာင်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်မှုများတဲ့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီက မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ RCSS တပ်မှူးက ဝင်မပြိုင်ဖို့ ဖိအားပေးတယ်လို့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ မိုင်းနုမ်ဟန်က ပြောပါတယ်။ ပါတီဆိုင်းဘုတ် တွေ စိုက်ထူတဲ့နေရာမှာလည်း ဟန့်တားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး မိုင်းအုဏ်ခိုင်က မိုင်းကိုင်မြို့နယ်က အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ပါတီဗဟို တာဝန်ရှိသူတွေ သွားရောက်ဆွေးနွေးမယ့် အခြေအနေရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမှာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/news/tnp-party-demands-release-rcss-detainee-09212020062725.html
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပကတိ အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီး ကျယ်ပြန့်သည့် ပါဝင်မှုဖြင့် လေးနက်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် ကရင်အမျိုးအသားအစည်းအရုံး-KNUက ယနေ့ (စက်တင်ဘာ ၂၁) တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်နေသည့် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများအားလုံး ငြိမ်ချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဖယ်ကြဉ်ထားခြင်းခံရသည့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်မှု ကို လည်း သေချာစေရန် လိုအပ်ကြောင်း ယနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အပေါ် ထုတ်ပြန်သည့် KNU ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဆိုထားသည်။“ အပြန်အလှန်လေးစားကာ ဖိအားပေးလိုက်လျောစေမှုကင်းပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာသည့် ရလဒ်ကိုအခြေခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ရပါမည်”ဟု ၎င်းတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ရခိုင်၊ ချင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများအတွင်း တပ်မတော်၏ လူနည်းစုအပေါ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကျူးလွန်နေမှုနှင့် ၎င်းကျူးလွန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိအစိုးရ၏ လျစ်လျူရှုထားမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ကရင်လူငယ်ကွန်ယက်(KYN)မှ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက် နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း ပြောဆို ထားသည်။
နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို ယခင်နှစ်များက မြန်မာပြည်ဒေသအချို့တွင် အခမ်းအနားများပြုလုပ်ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း လက်ရှိကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကျရောက်မှု အခြေ အနေများကြောင့် လူစုလူဝေး အခမ်းအနားများကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ အသီးသီးမှ သဘောထား ကြေညာချက်များ အသီးသီး ထုတ်ပြန်ကြေညာကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အား တရားဝင်ကျင်းပသည့်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့သည်။ ယနေ့ကျရောက်သည့် (၃၉) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ ကုလ သမဂ္ဂမှ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ခြင်း(Shaping Peace Together) ဟူ၍ ဆောင်ပုဒ်ချ မှတ်ထားသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1% 80%bb% e1%80%99%e1%80%94%e1 %80%b9%e1%80%99%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့်တောင်ပေါက်ကျေးရွာမီးရှိုခံရမှုတွင် အိမ်မီးရှို့ရာတွင် အသုံးပြု ခဲ့သည့် ယမ်းထုပ်များ၊ ယူနီဖောင်းများကို သိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်း ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူ များအဖွဲ့ (AHRDPA) မှ ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။
“ဘုရားပေါင်းက ၉၇ ဆောင်၊ တောင်ပေါက်ဆိုရင် ၆၇ ဆောင်အကုန်လုံး ၁၀၀ ကျော်မီးတိုက်ခံရတဲ့အခါကျတော့ အများဆန္ဒကို ယူပြီးလုပ်ရမှာပါ။ တချို့အိမ်တွေဆိုရင် အိမ်ကြီးတွေပါသွားတယ်။ အိမ်သေးသေးလေးတွေကို မီးမရှို့ခဲ့ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သက်သေခံပစ္စည်းက သူတို့မှာ မီးရှို့ဖို့ ပါလာတဲ့ ယမ်းထုပ်တွေ ဘာတွေပါလာတယ်။ ယမ်းထုပ်တွေ တွဲပြီး တော့ တမင်တကာ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ မီးတိုက်တာ။ အဲဒီဟာလေး သက်သေခံ ပစ္စည်းသိမ်းဆည်းရလို့တော့ရှိပါတယ်။ သိမ်းထားပါတယ်။ ရဲလည်းပါတယ်။ တပ်လည်းပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ရဲက ယူနီဖောင်းတွေ အင်္ကျီတွေ မေ့ကျန်နေခဲ့တာ တွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီဟာတွေကိုလည်း သိမ်းထားပါတယ်”ဟု ဦးမြတ်ထွန်းက ပြောဆိုသည်။ AHRDPAက ယင်းကျေးရွာ ၂ ခုသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစက်တင် ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သူ ဘုရားပေါင်း ကျေးရွာသား ဦးမောင်မောင်သန်း ၏ ပြောဆိုချက် ဗီဒီယို၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်မီးရှိုခံခဲ့ရသူ တောင်ပေါက်ကျေးရွာမှ ဦးခိုင်တို့၏ ပြောဆိုချက်ကို ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တကွ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်မူ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ဘုရားပေါင်းကျေးရွာနှင့် တောင်ပေါက်ကျေးရွာတို့အား တပ်မတော်က ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းမှားများ ကိုအဖွဲ့အစည်းတချို့က လုပ်ကြံသတင်းများ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်း၊ AA က မီးရှို့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://www.khitthitnews.com/2020/09/%e1%80%80%e1%80%bb%e1% 80%b1% e1%80%ac%e1%80
September 18, 2020 1361
လတ်တလော ဖော်ဆောင်နေဆဲ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU၏ ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ လမ်းစဉ်များနှင့် လုံးဝသွေဖည်နေပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်တည့်မတ်ရန်လိုအပ်ပြီဟု KNU Concerned Group က ပြောဆို လိုက်သည်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင်လုံ စတုတ္ထ အစည်းအဝေးမှ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာသည့် ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်မှ ၁၆ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နယ်စပ်ရှိ ကရင် များပါဝင်သော ၎င်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သုံးသပ်မှု အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးအပြီး ထိုသို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
လက်ရှိ နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသည့် ပြည်ထောင်စု သဘောတူညီချက်များပါ အချက်အလက်များအရ NCA အကောင်အ ထည်ဖော်မှုအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားရာတွင် ရှေ့ဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဆုံးသတ်သည့် လက်နက်ကိုင်လမ်း စဉ်စွန့်လွှတ်၍ ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းသွားရန်သာ ဦးတည်နေကြောင်း အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရ KNU ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း ပဒိုနော်စီ ဖိုးရာစိန်က ယခုလို ပြောသည်။ ၎င်းက “ ဒီ NCA လမ်းစဉ်အတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးက လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်စွန့်လွှတ် ရေးကိုပဲ ရောက်သွားမှာပဲ။ ဒါက ကျမတို့ ကေအဲန်ယူ ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမူ၊ လမ်းစဉ် တွေ စောဘဦးကြီးရဲ့ မူဝါဒ လမ်းစဉ်တွေနဲ့ အကုန်ဆန့်ကျင်နေတာ ပဲဖြစ်တယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၃ ရက်တာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယင်းအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထ အကြိမ်အစည်းအဝေး ရလဒ်အား သုံးသပ်ခြင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ( အဲန်စီအေ) နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်အား သုံးသပ်ခြင်း၊ ကရင့်တော်လှန်ရေး အခြေခံလမ်းစဉ်နှင့် အနာဂတ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အခြေခံမူ စသည်တို့ကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ KNU Concerned Group သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လပိုင်းတွင် ယခင် ကေအဲန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ပဒိုနော်စီဖိုး ရာစိန်ပါဝင်သည့် ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအချို့တို့ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ချက် များ၊ ရပ်တည်ချက်များကို အလျင်းသင့်သလို သဘောထား ထုတ်ပြန်မှုများပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ http://kicn ews.org/2020/09/%e1%81%bf%e1%80%84% e1%80%ad%e1 %80%99%e1%80%b9%e1%80
ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း အံဒင်ကျေးရွာအုပ်စု ငါးမျှားစခန်းကျေးရွာ၌ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်စောစောအချိန်ခန့်တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့် ဒီရေတိုက်စားမှုတို့ကြောင့် ငါးလှန်းစင်များနှင့် နေအိမ်အချို့ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ နံနက် ၁ နာရီအချိန်ခန့်တွင် လေပြင်းစတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ငါးလှန်းစင် ၂၀ ကျော် ပြိုကျပျက်စီးသွားကြောင်း ငါးမျှားစခန်း ကျေးရွာ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဝင်းက ပြောသည်။“ဒီ ၁၉ ရက်နေ့၊ ည ၁ နာရီကျော်လောက်မှာ ဒီရေလည်းတက်တယ် လေပြင်းလည်းတိုက်တော့ ငါးလှန်းစင် ၂၀ စင်လောက်တော့ ပျက်စီးသွားတယ်၊ ဆုံရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ စင်တစ်စင်ဆိုရင် သိန်း ၂၀၊ ၃၀ လောက်ကျမယ်။ ခုကျနော်တို့ စာရင်းလိုက်ကောက်နေတယ် ခန့်မှန်းခြေအရဆို ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအားလုံး သိန်း ၂၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်” ဟု နိုင်ဝင်းက ဆိုသည်။
ငါးမျှားစခန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ တံငါလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြသော အလုပ်သမားများသည် နေအိမ် နှင့် ငါးလှန်းစင် တွဲကပ်လျက်ပြီးနေထိုင်ကြကြောင်း၊ ယင်းကျေးရွာ၌ ငါးလှန်းစင် စုစုပေါင်း ၅၀ စင်ကျော်ရှိကြောင်း သိရ သည်။ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု၌ ငါးလှန်းစင်ပျက်စီးသွားသူ မိဇာလေးက “ခုဆိုမိုးလည်းကုန်ခါနီးပြီးဆိုတော့ ရေမလာတော့ ဘူးထင်လို့ ငါးလှန်းစင်တွေထုတ်ကြတာပေါ့ ခုတော့အားလုံးကုန်သွားတာ ရေကတော့ ထပ်ပြီးတော့ စိုးရိမ်နေရသေးတယ်။ ပင်လယ်ကလည်း ငါးဖမ်းခွင့်ပိတ်ထားတာဆိုတော့ အလုပ်သမားခတို့ စားဝတ်နေရေးတို့ကတော့ ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ အလုပ်ကလည်းအဆင်မပြေတော့ ခုကအသစ်ပြန်ရင်းဖို့က အခက်ခဲဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ရှိသလောက်နဲ့ ပြန်လုပ်ရတာပေါ့ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ တအားခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့” ဟု ၎င်းက မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
ထို့အတူ စက်တင်ဘာလ ၂၀၊ နံနက် ၄ နာရီခန့်၌ ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ပိုင်းကျေးရွာတွင် ပင်လယ် ဒီရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပင်လယ်ရေတားတမံတစ်ခုနှင့် လူနေအိမ် ၄ လုံးပျက်စီးသွားကြောင်း သိရသည်။ အလားတူ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် စက်စဲကမ်းခြေ၊ မြအဏ္ဏဝါ စားသောက်ဆိုင် ဝင်းရှေ့တွင် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ခန့်က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်တစ်ပင် ပြိုလဲကျခဲ့သဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သစ်ပင်ပိ၍ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့၊ ကုလားဂုတ်ကျွန်း အပေါ်ဆိပ်အနီး (ပသျှူး ချောင်း) ၌လည်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ် (၄၀) ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီး၊ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး သိန်း (၁) ထောင်ကျော်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ http://burmese.monnew s.org/2020/09/21/%e1%80%9c%e1%80% b1%e1%8%95%e 1%80%bc%e1%
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကြီးစိုးနေသည့် အစဉ်အလာကို ထိုးဖောက် မည်ဟု ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KNDP) ဖာပွန်မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် ၂ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း နော်သဇင်တုပ် က ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ “ဖာပွန်မှာစည်းရုံးရေး ဆင်းတော့ ကိုယ့်ဖက်တချို့ပြန်ပါလာတယ်။ အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်တော့။ အရင်က ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့ ကြံခိုင်ရေး ကြီးစိုးတဲ့အစဉ် အလာကို ထိုးဖောက် သွားမယ်။ ကရင်ပါတီအတွက် အခြေကုတ်တခုခုရဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်” ဟု သူမက ပြောသည်။
ဖာပွန်တွင် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အများအပြားရှိသည့်အတွက် မြို့ပေါ် အနီးတဝိုက် တွင်သာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ပြီး ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ က ရာနှုန်းပြည့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် နယ်မြေဖြစ်သည်။
“ အခုတခေါက်ပြောနေကြတာရှိတယ်၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အလှည့်လို့လေ။ ကျနော်တို့တော့ ဒီလိုမ မှတ်ယူ ထားဘူး။ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမယ်။ ရတာ မရတာ တစ်ပိုင်းပေါ့၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမယ်” ဟု KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ပြောသည်။ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဖာပွန်မြို့နယ်၌ ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ ရာနှုန်း ပြည့်ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%95% e1%80%bc %e1%80%94%e1%80
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ကျားဖြူပါတီ ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ SNDP ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို သေချာမသိရှိသေးကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် သာတွေ့ရှိထားကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းဘိုးအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
“ဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့လူ အကြောင်းကြားလာခြင်းမရှိသေးဘူး။ ဘယ်လို အရေးယူသွားမယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ အွန်လိုင်းမှာပဲ မြင်သေးတော့ ဘာမှတော့ ပြောလို့မရသေးဘူး” ဟု စိုင်းဘိုးအောင် က ပြောသည်။ ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးခံရသည့်အပေါ် စိစစ်သွားပြီး အရေးယူမည့် ကိစ္စ ဆုံးဖြတ်သွားမည် ဟုလည်း စိုင်းဘိုးအောင် က ပြောသည်။ သျှမ်းပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်မှု မရှိကြောင်း ပြသသည့် ပြယုဒ် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် သျှမ်းပြည်တွက် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေကြောင်း ကျားဖြူပါတီ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုးအောင် ကပြောသည်။ “သျှမ်းအချင်းချင်း ခြေထိုးနေခြင်း၊ သျှမ်းပြည်သားအချင်းချင်း ဖျက်ဆီးခြင်းဟာ သျှမ်းပြည်အတွက် ဆုံးရှုံးမှု ပဲဖြစ် ပါတယ်” ဟု ဦးဘိုးအောင် ကပြောသည်။
သီပေါမြို့နယ် တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲချုပ် (SNLD)၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ( USDP)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (SNDP)၊ တအာင်း အမျိုးသားပါတီ (TNP) ၊ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) နှင့် ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ (UBP) တို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟုသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18558
ကရင်နီလူငယ်အင်အားစုများက ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်းရံ၍ ရှားတောမြို့နယ် ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ပြီး လူငယ်အင်အား ၁၀၀ ကျော်ခန့်ဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ဝန်းရံ ရာတွင် အခြားမြို့နယ်များမှ ဝင်ရောက်၍ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လူငယ်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီရှားတောမြို့နယ်မှာ ဝင်ပြိုင်မယ့် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ မဲလိုချင်လို့နေရာရချင်လို့ ဝင်အရွေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့သမိုင်းကြောင်း အရင်လေ့လာဖို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သူတို့က အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ကယားပြည်နယ် အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူငယ်အရေး၊ အမျိုးသမီးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ခုမှ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ ပေါ်လာတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အသိပေးစေချင် တယ်။ နောက်တစ်ခုကသူတို့က ပြည်နယ်က လူတွေသိတယ်။ ဒေသခံတွေဖြစ်တယ်။ ပြည်နယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။ တချို့က နေရာမရခင် ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ခင် ပါတီထက် ပြည်နယ်အရေးကို ဦးစားပေးမယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီးမှ ပြည်နယ်အရေးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်နယ်ဘက် မရပ်တည်ဘဲ ပါတီဘက်ရပ်တည်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကရင်နီပြည်ရဲ့သမိုင်းကို မထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒီလိုလူကို နောက်ထပ် နေရာထပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်ကို ထပ်စော်ကားလိမ့်မယ်။ သူတို့ပြည်နယ်သမိုင်းကို မှေးမှိန်အောင် လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလူတွေကို ထပ်မရွေးဖို့ လိုမယ်။ ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုချစ်ပြီး ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို စောင့်ရှောက်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရွေးချယ်ကြဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်” ဟု ကရင်နီလူငယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုဒီးဒီးက ဒေါဝယ်ရောကျေးရွာနေ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသည်။
ကရင်နီလူငယ်များမှာ လွိုင်ကော်မြို့မှ တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူထပ်သော ရှားတောမြို့နယ် ကျေးရွာများသို့ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် သွားရောက်၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် ဝန်းရံလှည့်လည်ကြပြီး ဒေသခံများအား ဟောပြောကြသည်ဟု သိရသည်။ ကရင်နီလူငယ်အင်အားစုများမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် NLD ပါတီနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များတွင် ဝန်းရံ၍ လုံခြုံရေးတာဝန်၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား စကားပြန်တာဝန်နှင့် မဲရုံ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတာဝန်များအား ကူညီပေးခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရှားတောမြို့နယ်သည် တောင်ယာ လုပ်ငန်း ကိုသာ အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ကယားလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ပြီး လူဦးရေ ၇၀၀၀ ကျော်ရှိကာ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၅၁၄၇ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/193051
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးတွင် စက်တင်ဘာ ၂၁ရက်ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့၌ ပြည်တွင်းစစ်ဆန့်ကျင်ကြ “ Photo Campaing” ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန် ဖြစ်သည့် အတွက် ရခိုင်ပြည် နှင့် ချင်းပြည် အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ပေးရန် တွန့်အားပေးချင်သည့်အနေဖြင့် “ ပြည်တွင်းစစ်ကိုဆန့်ကျင်”သည့် ကမ်ပိန်း ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လုံခြုံရေး သိပ္ပံ ဒါရိုက်တာ ကိုဝင့်ထည်ကောင်းမြတ် က ပြောသည်။
“ ရွေးကာက်ပွဲရှိနေတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ထဲဘဲ ရခိုင်ပြည် နဲ့ ချင်းပြည်နယ် မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။ လူထုတွေကလည်း သိရှိမှုအားနည်းတယ်။ အစိုးရတွေကတော့ သိရှိပေမယ့် ဒီအပေါ်မှာကို ကျယ်ကျယ်လောင်းလောင်းနဲ ပြည်သူထိခိုက်မှုတွေ ကို လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်။ အဲပေါ်မှာ ကျနော်တို့ တွန်းအားတစ်ခုပေးချင်တဲ့ အနေနဲ့ ပြုလုပ်တာပါ” ကိုဝင့်ထည်ကောင်းမြတ် က ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ရခိုင်ပြည် စစ်ပွဲ အတွင်း သေဆုံးသူ (၂၉၀) ရှိပြီး၊ မသန်းစွမ်းသူ ၆၅၀ နှင့် စစ်ဘေးရှောင်း ပြည်သူ ၂ သိန်းကျော်ရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကိုဝင့်ထည်ကောင်းမြတ် ကပြောသည်။“ကျနော်တို့ လူငယ် အနေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို အတူဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် တနေ့ကျရင် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရနိုင်မယ်။ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေအားလုံး က ဒီပြည်တွင်းစစ်ကို ဆန်ကျင်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်” ဟု ကမ်ပိန်းပွဲကို တက်ရောက်လာသည့် လူငယ် ကိုဇော် ကပြောသည်။
အဆိုပါ Photo Campaing ကို အရပ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မိုင်းပန်လူငယ်အဖွဲ့အစည်း၊သျှမ်းတောင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့ နှင့် လူငယ် (၆၀) ခန့် တို့ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ “ပြည်တွင်းစစ်ဆန့်ကျင်ကြ” ဆိုသည့် စာသားကို ကိုင်ကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စကားပြောကြားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြောင်းသိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဖြစ်သည်။ https://burmese. shannews.org/archives/18573
နှစ်ပေါင်း (၇၀) နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးသတ်ရန် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နေ့တွင် ကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ WMR က ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တိုင်ရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ နှင့် အစိုးရ၊ တပ်မတော်ကြား အသိတရားဖြင့် နားလည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို အတူတကွဖော်ဆောင်ရန် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ လက်ရှိ Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်နေချိန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး ကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြင်းထန်သည့်ထိုးစစ်နှင့်အတူ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်လည်း စစ်ဆင်ရေးများ ထပ်မံပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့နေရကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာလည်း ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေ ပြန်ပြီးမှရှိလာတယ်၊ ပြီးရင် ရခိုင်ပြည်မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေနှင့် ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ် ဆိုတော့ တစ်ဖက်မှာလည်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ Covid-19 လည်း မြန်မာပြည်အနှံ့ ကူးစက်မှုနှုန်းအရှိန်မြင့်လာနေတယ်။ ဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အေးချမ်းသာယာဝပြောလာဖို့ရန်နှင့် တန်းတူညီမျှ ရေး၊ တို့ကိုရှေ့ရှုပြီး စစ်ပွဲများ၊ ပဋိပက္ခများရပ်တန့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းလိုတာကြောင့် ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်”ဟု ကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆရာဦးအင်ခွမ်တန်ဂွန်း က ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများလုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်နှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA တို့ကြား Bilateral အဆင့် အပစ်ရပ်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားနိုင်မှ ယုံကြည်မှုရရှိ နိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အဖြစ် UNGAS တွင် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/09/2 2/%e1%80 %95%e 1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ကော့သပ်ကျေးရွာ၌ စိုက်ထူထားသော NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးသူ လူငယ်တစ်ဦးက ကြေအေးတောင်းပန်ခြင်းမပြုသဖြင့် ကျိုက်မရောမြို့မရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။ မွန်ကျေးရွာတွင် NLD ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံသလို တောင်းပန်ခြင်းလည်းမပြုသည့် အဆိုပါ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကော့သပ်ကျေးရွာသားက စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ဆိုင်းဘုတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျိုက်မရောမြို့နယ် NLD အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဇော်ဦးက “ကျနော်တို့ဖက်က ပထမစဉ်းစားပါတယ် ကောင်လေးဖက်က ကြေအေးဖို့တောင်းပန်ရင် ကျနော်တို့ဖက်က ကြေးအေးဖို့အဆင်သင့်ပါ သူ့ရဲ့အနေအထားက လုံးဝတောင်းပန်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇၊ ၅၈ နဲ့ အမှုဖွင့်ခဲ့တာပေါ့၊ တကယ်လို့ သူ့ဖက်က ကျနော်တို့ကို တောင်းပန်မယ်ဆိုရင် ဒီဟာကို ဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူ့ပုံစံက လုံးဝလက်မခံတော့ အဲဒါနဲ့ကျနော်တို့အမှုဖွင့်တာပါ”ဟု ဆိုသည်။ ကော့သပ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက “ သူ့မိဘတွေကို ကျနော်တို့ခေါ်တွေ့တယ် NLD ကိုခေါ်တယ် ဒါကိုယ့်ရွာသားတွေအားလုံးဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ပေးမယ် ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် လျော်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ သူပြန်ပြောတာက မလျော်နိုင်ဘူး မွန်ရွာမှာ NLD ဆိုင်းဘုတ် လာပြီးမထောင်နဲ့ဆိုတော့ ကျနော်ကလည်း ညီလေးရေဒါမျိုးမပြောသင့်ဘူး ခွင့်ပြုချက်နဲ့အားလုံး ထောင်လို့ရပါတယ်လို့၊ ဒါကိုသူကလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတော့ ရဲလက်ကိုပဲ အပ်လိုက်တာပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၅၇၊ ပုဒ်မ ၅၈(ခ)၊ ပုဒ်မ ၅၈(ဃ)၊ ပုဒ်မ ၆၀၊ ပုဒ်မ ၆၁(ခ)နှင့် ပုဒ်မ ၆၁(ဂ)တို့သည် ရဲ အရေးပိုင် သည့် ပုဒ်မများဖြစ်သည့်အတွက် ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်နိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ တွင်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၁၅ ရက်အတွင်းဖြစ်စေ အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ၁ နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ကျပ် ၁ သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း ပြဌာန်းထားသည်။ https ://www.bnionline.net/mm/news-75614
အထူးဒေသ(၄) မိုင်းလားတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်သည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၆၀)သည် ယနေ့ မွန်းလွှဲပိုင်း ၂ နာရီ ခန့် တောင်ကြီးမြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
ထို ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် မိုင်းလား မှပြန်လာပြီး တောင်ကြီးသို့ ခေတ္တခဏနားကာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကြီးမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးခွန်သက်နှောင်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“မိုင်းလာကနေတစ်ဆင့် ပြန်လာမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ကတော့ (၆၀) ကျော်ထက်ဝင်လာတယ်။ ကျတော်တို့ က ဒီကနေတစ်ဆင့် ကားကို ပြန်စီစဉ်ပေးပြီး သင်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကို ပြန်ပို့ပေးတာပါ”ဟု ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးခွန်သက်နှောင်း က ပြောသည်။ အဆိုပါဝင်လာသူများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့သို့ ပြန်ပို့ ရာတွင် ကားခများကို တစ်ချို့ကိုသာ အစိုးရဘက်မှ ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း သိရသည်။“ဒီကိုရောက်လာတဲ့ သူတွေကတော့ တစ်ချို့က ကားခကို တက်နိုင်ကြတယ်။ လုံးဝ ငွေကြေး အခက်ခဲရှိတဲ့သူ တွေကိုတော့ ကျတော်တို့ဖက်နေ ပြီးထောက်ပံ့ ပေးတယ်” ဟု ဦးခွန်သက်နှောင်းက ပြောသည်။ သျှမ်းပြည်နယ်တောင်းပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ထဲ သို့ ရွှေပြောင်း အလုပ်သမား များကို မိမိနေထိုင်ရာသို့ ပြန်ပို့ဆောင်ပေးရာတွင် ဧပြီလ မှ စတင်လက်ခံပြီး အခုချိနိထိ (၅၀၀၀) ကျော်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တောင်ကြီးမြို့ထဲသို့ မြဝတီမှ တရားဝင် ဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူများကို Quarantine ထားရာတွင် အစိုးရဖက်မှ စားစရိတ်များကို ထောက်ပံ့ပေ့းပြီး ကိုယ့်မြို့နယ် ကိုယ်အစီနဲလာသူများကို တစ်ရက်ကို (၄၀၀၀) နှုန်းဖြင့် Quarantine ဝင်ရသည် ဟု ဦးခွန်သက်နှောင်း က ပြောသည်။ https://burmese.sha nnews.org/archives/18566
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်အပြင် ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များတွင် မွန်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယခူအခါ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများ စတင်ဆောင်ရွက် နေပြီဟု ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရသည်။
“ကျမတို့ကားတန်းနဲ့ လှည့်လိုက်တယ် တစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီ အဆင်တော့ပြေပါတယ် ကျမတို့အတွက် မဲသေချာပေါက်ရ မယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် မွန်အမျိုးသမီးတွေကျတော့လည်း လူတွေကအများကြီး လက်ခံတဲ့အနေအထား ချစ်ခင်တဲ့အနေအထားတွေတော့ မြင်နေရ တာပေါ့နော် ကျမတို့အတွက်လမ်းပွင့်နေပြီလို့ပြောလို့ ရပါတယ်၊ ကျမတို့ပါတီ တော့ လူတွေအားလုံးက သိသွားတာပေါ့နော် ပါတီကြော်ငြာတာလောက်ကတော့ ရမယ် ဒါပေမယ့် ပြောလို့မရဘူးလေ အခြေအနေကလည်း ရနိုင်တဲ့အနေအထားလည်း ရချင်ရသွားမှာပေါ့ ပြည်သူကျတော့လည်း ကျမတို့ကိုလိုလားနေတဲ့အပိုင်း တွေ ရှိပါတယ်” ဟု မိသန်းရှင်က ဆိုသည်။
မိအေးဇာဝင်းက “ကျမတို့တောင်ဥက္ကလာပေါ့နော် ဆိုင်းဘုတ်တင်အခမ်းအနားလုပ်ပြီးတော့ ဆိုင်းဘုတ်တင်တယ် ကျမတို့ ရပ်ကွက်က မွန်နည်းနည်းပါးပါး ခေါ်ပြီးတော့ ကျမတို့ကိုယ် မိတ်ဆက်တယ် အဲလောက်ပဲ ကျမတို့လုပ်ထားပါသေးတယ် မွန်ပြည်နယ်နဲ့တော့ မတူးဘူးပေါ့ရှင် ဒီမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ မွန်ပြည်နယ်ကျတော့ အင်တိုက်အား တိုက်ရှိတာပေါ့နော် ကျမတို့ကျတော့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကို ကျမတို့က စုပြီးနေထိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်လို့မို့လို့ ကျမတို့က တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ကိုပဲ အခုဟာက ဖက်ဒရယ်ကိုသွားမှာဆိုလို့ရှိရင် ဖက်ဒရယ်ကိုပဲ ကျမတို့က မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေး ဆင်းရမှာပါရှင့်”ဟု ပြောသည်။
“အခုလက်ရှိလောလောဆယ် ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုက အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော် ဒီသွားခဲ့တဲ့ နေရာ ဆိုလို့ရှိရင် ကော့ဘိန်းရယ် ကော့ပေါက်ရယ် ပြီးလို့ရှိရင် မင်းရွာရယ် အဲဒါကျတော့ ပါတီဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကိုယ့်ရဲ့ပိုစတာတွေ ပေါ့နော် တင်ဖြစ်ခဲ့တယ် အဲမှာဆိုလို့ရှိရင် လူငယ်တွေ ဆိုလို့ရှိရင် ပိုပြီးအားရတာပေါ့နော် ကျမဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ နော် တချို့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် မိန်းခလေးတွေ နိုင်ငံရေးဘက်ကို ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ် အဲဒီအတွက် ကျမဝမ်း သာတာပေါ့နော် နောက်တစ်ခု ကိုယ်က မိန်းခလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်က နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံလည်း အခြားသူတွေနဲ့ စာလို့ရှိရင် ကိုယ်ကနည်းနည်း အားနည်းတာပေါ့နော် အချို့ဆိုလို့ရှိရင် ပြောကြတယ် နုသေးတာပေါ့ အဲလိုပြောကြတဲ့ လူလည်း ရှိတာပေါ့နော်”ဟု မိအေးယဉ်ဝင်းက ဆိုသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75613
သျှမ်းပြည်အတွင်း အရပ်သားများ မကြာခဏ သတ်ဖြတ်ခံရသော်လည်း ကျူးလွန်သည့် တရားခံများ တကြိမ်တခါမှ မပေါ် ပေါက် မဖမ်းမိဘဲ အမှုများမှာ အလိုအလျောက်ပြီးဆုံးခဲ့ရသည်။ များသောအားဖြင့် သတ်ခံရသည့် အရပ်သားများသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ နှင့် ဆက်စပ်သူများဟု အစိုးရ တပ်မတော်ဘက်မှ အစဉ်အမြဲ ပြောဆိုထားသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ သို့သော် သတ်ဖြတ်ခံရသည့် အရပ်သားများသည် တောတောင် လယ်ယာထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသည့် တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီး မိခင်ဘာသာစကားမှလွဲပြီး တခြားဘာသာစကားအားနဲကြကာ စစ်ကြောင်းနှင့် တွေ့ချိန်၊ လက်နက်ကိုင်များနှင့်တွေ့ချိန် ထိတ်လှန့် ကြောက်ရွံပြီး ထွက်ပြေးကြသလို တချို့မှာလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းသည်ကို ပြန်မဖြေတတ်၊ မဖြေနိုင်ကြသဖြင့် ရိုက်နှက်ဖမ်းချုပ်သတ်ဖြတ်ခြင်းခံကြရသည်။
လက်ရှိ ယခု လပိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် နှင့် မူဆယ်မြို့နယ် အတွင်း တအာင်း (ပလောင်) ရွာသားများ သတ်ဖြတ်ခံရသည့် အပေါ် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တအာင်း ပြည်သူများက တောင်း ဆိုကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်ကလည်း သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ် နမ့်ကတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဒေသခံ(၂)ဦးနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် လွယ်မွန်းကျေးရွာ ဒေသခံ (၁) ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသူ (၃)ဦးသည် လွန်ခဲ့သည် မေလကုန်က စတင်ပျောက်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ ၃လ အကြာမှ အလောင်းကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မူဆယ်မြို့ တအာင်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးညီအောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။
ထိုနယ်မြေ အတွင်းသို့ လွန်ခဲ့သည့် ၃ လခန့်က အစိုးရ တပ်မတော် တပ်မ(၉၉ ) လာရောက် လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ သံဃာများနှင့် ပြည်သူများက ပြောဆိုကြသည်။“ အခု မူဆယ် အလောင်း (၃)လောင်းကိစ္စက ခက်တော့ခက်တယ်။ တပ်မ(၉၉) ကလည်း အဲ့နယ်မြေမှာ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးပြောတယ်။ သူတို့ ကငြင်းဆိုထားတယ်”ဟု ဦးညီအောင် ကပြော သည်။ ထိုသို့သတ်ခံရပြီး မြေမြုပ်ထားသည့် အလောင်း (၃)လောင်းသည် တောထဲတွင် မီးသွေးဖုတ်သည့် ရွာသားများ၊ တောထဲတွင် ရှာဖွေစားသောက်နေသည့် အရပ်သားပြည်သူများဖြစ်ကြောင်း ဦးညီအောင် က ပြောပြသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း အတွင်း အစိုးရတပ်မတော် မှ ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမှုပေါင်း (၁၄၅) ခုရှိပြီး စုစုပေါင်း ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခံရသည့် ဒေသခံ ၄၁၇ ဦးရှိကြောင်း တအာင်း အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများမှာ တပ်သားများမှ ပြည်သူများကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ စစ်သားစုဆောင်းခြင်း၊ စစ်ဘွတ် ဖိနပ်စီးပြီး ကန်ခြင်း၊ တုတ်-ဝါးလုံးဖြင့် ရိုက်နှက်ခြင်း၊ လက်သီးဖြင့် ထိုးနှက်ခြင်း၊ သေနတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း TWO ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။“အရာရာကို စိုးရိမ်နေရတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ရသလိုတိုက်ပွဲ မဖြစ် ရင်လည်း စစ်ကြောင်းတက်လာရင် ပေါ်တာဆွဲတာ။ စစ်ဆေးတာခံရတယ်။ မဖြေနိုင်ရင် ရိုက်တယ်။ ကြောက်နေရတယ်”ဟု သျှမ်းမြောက် ကွတ်ခိုင်နယ်မြေတွင် နေထိုင်သည့် အမျိုးသမီး တဦးကပြောသည်။ https://burmese.shannews.org /archives/18545
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ၊ ကေအဲန်ယူ၊ သထုံခရိုင် ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ခလယ်ဟယ်ရွာ (ညောင်တုန်းရွာ) လမ်း၌ ကိုဗစ် ကာကွယ်ရေးဂိတ် ဖွင့်လှစ်မှုအပေါ် ဒေသတွင်း စခန်းလာထိုင်ထားသည့် အစိုးရစစ်တပ်က စက်တင် ဘာ ၁၈ နှင့် ၁၉ ရက်များတွင် လာရောက်ဟန့်တားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သထုံခရိုင် အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောစိုးမြင့်က ပြောသည်။“ကျနော်တို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဂိတ်ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖွင့်လို့မရဘူးဆိုပြီး လာကန့်ကွက်တယ်။ ဂိတ်ကို ဖြုတ်ခိုင်း တယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ပြန်ရှင်းပြတော့ စကားအချေအတင်များတယ်”ဟု ပဒိုစောစိုးမြင့်က စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ သထုံခရိုင်နှင့် အနီးတဝိုက်တွင် ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိလာမှု နှင့်အတူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လာမည်ကို ဒေသခံများစိုးရိမ်ကာ ကာကွယ်တားဆီးရေးဂိတ်ထားရှိရန် တောင်းဆိုမှုကြောင့် သထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူများက ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို စက်တင် ဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများက ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဂိတ် ဖွင့်လှစ်ထားမှုအပေါ် အစိုးရ စစ်တပ် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်-စကခ ၄၊ ခြေမြန်တပ်ရင်း -ခမရ ၄၀၉ လက်အောက်ခံ ညောင်ရွာစခန်းရှိ အရာရှိ တဦီးပါအဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် လာရောက်ဟန့်တားပြီး ဂိတ်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကေအဲန်ယူ၊ သထုံခရိုင်၊ ဖားအံမြို့နယ်၊ ခလယ်ဟယ်ရွာတွင် ကိုဗစ် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီလ အတွင်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးသည့်ဂိတ် ထားရှိခဲ့ဖူးပြီး ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုနည်းသွားချိန်တွင် ဂိတ်ကို ပြန်လည် ပိတ်သိမ်းခဲ့ကာ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုများ ပြားလာသည့် ယခုအချိန်တွင် တဖန်ပြန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခရိုင်တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတုန်းကလည်း ကေအဲန်ယူ သထုံခရိုင် မော်စကိုဒေသ ထောင်မှူး ကျေးရွာအုပ်စု ဈေးမသွယ်ရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Covid -19 ရောဂါကာကွယ်ရေး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး ရေးဂိတ်တစ်ခုအား တပ်မတော်၏ ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရဖူးသည်ဟု ကေအဲန်ယူဘက်က ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/09/%e1% 80%b1%e1%80%80%e1%80%a1%e1%80%b2%e1%80%94%e1%
ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်တွင် ကယန်းအမျိုးသား ပါတီ (KNP) နှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရက်တိုက်သွားသောကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးကို တင်ပြခဲ့ပြီး ကော်မရှင်က မဲဆွယ်ပွဲရက်များ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က ကယားပြည်နယ် မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ မယ်စဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုစဲ့ကျေးရွာတွင် ကယန်းအမျိုးသား ပါတီဝင်များနှင့် NLD ပါတီမှ ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှိုတို့ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ဆင်းသည့်ရက် တိုက်ဆိုင်သွားသောကြောင့် NLD က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်းဘီထူး (ခ) လွီးစီငြိမ်းက ပြောသည်။ မယ်စဲ့မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ အမည်မဖော်လိုသည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို ကိုယ်တိုင် ဖုန်းဖြင့် ကော်မရှင်ရုံးသို့ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆင်းမည့် နေ့ရက်များကို မတိုက်အောင် ပါတီ ရှစ်ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှစ်ဦးတို့ကို ခေါ်ပြီး ရက်ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေး ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးက ပြောသည်။
KNP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်းဘီထူးက “ဥပမာ ကျောက်စု ဆိုတဲ့ရွာကို ကျွန်တော်တို့ သွားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် အခု အချိန်ဇယား ပြန်ဆွဲတော့ မနက်ဖြန်ဆို ကျောက်စုရွာကို ကျွန်တော် ပြန်သွားရတော့မလိုလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်လိုခေါ်မလဲ၊ ရက်တွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားကုန်တယ်” ဟု ပြောသည်။ မယ်စဲ့မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး KNP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်းဘီထူးက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် KNP ပါတီကို အသက်အငယ်ဆုံး ၂၈ နှစ်အရွယ်မှ အသက် ၄၀ အရွယ်အတွင်း လူလတ် ပိုင်းများက ဦးဆောင်၍ ကယားပြည်နယ်ရှိ ဒီးမော့ဆိုနှင့် မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဖယ်ခုံမြို့နယ် ၊ ကရင်ပြည်နယ်ရှိ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ရှိ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တို့တွင် ဝင်ရောက် ယဉ်ပြိုင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ http://www.mi zzimaburmese.com/article/73623
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ မေယုတောင်ထဲ ညောင်ချောင်းကျော်လမ်းတွင် မြန်မာတပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့် တပ်တော် (AA) တို့အကြား ၂ ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ကံ့ကော်မြိုင် နတလစံပြကျေးရွာသား တစ်ဦးက “ပထမဖြစ်တာက စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် နေ့လယ်မှာ ဒိုးတန်းချောင်းထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ညောင်ချောင်း တောင်ကျော်လမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ နှစ်ရက်ဆက် တိုက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ အသံမကြားရသေးပါဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။ ယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် နေရာသည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ညောင်ချောင်းမှ မောင်တောမြို့နယ် ဥဒေါင်းကျေးရွာကို မေယုတောင်ကို ဖြတ်ပြီး ဖောက်လုပ်နေ သည့် ကားလမ်း အနီးဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု သိရသည်။
“ ပထမနေ့ ဖြစ်တာက ၁၂ နာရီကျော် ၁ နာရီလောက် စဖြစ်တယ်။ မိနစ် ၂ဝ ကြာခဲ့ပါတယ်။ ဒိုးတန်းချောင်းထဲ ဒညင်းတော ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ လင်းလုပ်ခေါင်းတောင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဖြစ်ကြတယ်။ မနေ့ကတော့ ဦးရွှေမောင် နွားရုံနောက်မှာ နွားစားကျက်ကွင်းရှိတယ်။ အဲဒီနောက်က တောင်ချိုင်မှာ ဖြစ်ကြတယ်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော် ၃ နာရီလောက်စပြီး ည ၆ နာရီ ကျော်ထိ ဖြစ်ကြတယ်။ ရွာကတော့ အပြန်အလှန်ပစ်သံတွေ ဒီအတိုင်းကြားနေရတယ်။ ရွာမှာက အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေး တွေတော့ တစ်ခြားနေရာကို ရှောင်နေကြတယ်။ ရွာကို လက်နက်ကြီးကျည်တွေကျတာလည်း မရှိပါဘူး”ဟု ပြောကြား သည်။“ပထမနေ့က မိနစ် ၂ဝ၊ နာရီဝက်လောက်ဖြစ်တယ်။ မနေ့ကတော့ ညနေ ၃ နာရီက နေဝင် ၆ နာရီကျော်ထိ ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့တော့ အသံတိတ်နေတယ်။ သေနတ်သံတွေကို ပေါက်ပေါက် ဖောက်သလိုကြားရတယ်။ ဖြစ်တဲ့ နေရာက ရွာနဲ့ နည်းနည်းဝေးပြီး တောင်ထဲမှာ ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ ရွာဘက်ကို လက်နက်ကြီး ကျည်တွေ လာကျတာတော့ မရှိပါဘူး။ ရွာသားတွေကတော့ ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ကိုယ်နေကြတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ညောင်ချောင်းတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ရှိနေပြီး အနီးဝန်းကျင်တွင် အခြေအနေမှာ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေကြောင်း၊ တောင်ထဲတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်၍ ညောင်ချောင်းကျေးရွာအနီးတွင် အေးအေးဆေးဆေးရှိနေကြောင်း ၎င်း အရပ်လူကြီးက ပြောကြားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75610
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်ရေးပဋိပက္ခများကြား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု များစွာ ရှိနေကြောင်း စုံစမ်းရှိရသည်။ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ လမှ သြဂုတ်လအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ကြောင့် မြေမြုပ်မိုင်းနင့်မိ သေဆုံးသူ (၂၃)ဦး နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၂၀)ဦး၊ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး သေဆုံးသူ (၂၅)ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ (၆)ဦး တို့ ရှိကြောင်း သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ HST-NSS က ယနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြည်တွင်း နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၁၂၈၀ ကျော်၊ ကလေးစစ်သား စုဆောင်းခံရမှု ၂ ဦး၊ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရသူ ၇ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၁၀ ဦးထိကြောင်း ရေးသားထားသည်။ အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူ များသည် သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်တုံ၊ နမ့်ခမ်း နှင့် မူဆယ်မြို့နယ် တို့ဖြစ်ကြောင်း (HST-NSS) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဟောင်းဒေါင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ ကိုဗစ် ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ တော်တော်များတယ်။တယောက်တယောက် ဆိုရင်လူတွေက သိပ်ပြီး အာရုံမထား ကြဘူး။ တကယ်တော့ အားလုံး ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင် တလကို ၁၃ ယောက်လောက် ရှိတယ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် ခံနေရတာ ” ဟု ဦးဟောင်းဒေါင် က ပြောသည်။
“ အခု အချိန်က ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတဲ့သူက အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ စားဝတ်နေရေးကလည်း ဖူလုံမှု မရှိဘူး။ လွတ်လပ်သွားလာတဲ့ချိန်တောင် ထောက်ပံ့မှုအရမ်းနည်းတယ် လုံလောက်မှု မရှိဘူး။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ထောက်ပံ့မှု မရှိဘူး။ ကိုဗစ်ကာလမှာပိုပြီး ဆိုးရွာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်” ဟု HST-NSS မှ ပြောခွင့်ရ လွေးလှားရိုန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုနှုန်း တရက်ထက် တရက်မြင့်တက်လာချိန် တွင် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကလည်း မြင့်တက်လာကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တားဆီး ချိန်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ မဖြစ်စေချင်ကြောင်းလည်း ဦးဟောင်းဒေါင် က ထောက်ပြပြောသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲ မဖြစ်ပွားရန် အတွက်နှင့် အရပ်သားပြည်သူများကို လူ့အခွင့်အရေးမချိုးဖောက်ရန် သျှမ်းမြောက်လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/18571
နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ ဥက္ကဌ၏ နေအိမ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က လက်ပစ်ဗုံးတလုံး တွေ့ ရှိရပြီးနောက် ယင်းအိမ်တွင်ရှိသည့် CCTV မှတ်တမ်းများကို ထပ်မံစစ်ဆေးရာမှတဆင့် နောက်ထပ် လက်ပစ်ဗုံးတလုံး ထပ်မံ တွေ့ ရှိရကြောင်း သိရသည်။ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ထန်းတပင်ကွက်သစ်တွင် နေထိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းထွေးမှာ ထိုနေ့က အိမ်တွင် ရှိနေစဉ် ပစ္စည်းတခုဖြင့် ပစ်လိုက်သည့် အသံကြောင့် ခြံဝန်းအတွင်း စစ်ဆေးကြည့်ရာ ကားဘေးတွင် လက်ပစ်ဗုံးတလုံးကို စတင်တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများက ဦးသိန်းထွေး၏ နေအိမ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော CCTV ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ စိစစ်ရာ ပထမဗုံးသီး ပြုတ်ကျသည့် အသံကြားသည့် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၄၈ မိနစ် ခန့်တွင် ခြုံထဲ၌ လှုပ်ရှားမှုတချို့ ရှိခဲ့ကြောင်း သတိပြုမိခဲ့သည်ဟု တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်း ထွန်းက ပြောသည်။ ယင်းဗုံးနောက်တလုံး ထပ်တွေ့ ရသည့် အချိန်မှာ မနေက နေ့လယ် ၂ နာရီ မိနစ်၂၀ တွင် ဖြစ်ပြီး ယင်းလက်ပစ်ဗုံးမှာလည်း ပထမ အ ကြိမ် တွေ့ ခဲ့သည့် လက်ပစ်ဗုံးအတိုင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုက ထုတ်လုပ်သည့် ဗုံးပုံစံ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တချို့ ထံတွင်လည်း ရှိကြောင်း တပ်မတော်ဘက်က ပြောသည်။
ကာယကံရှင် ဖြစ်သူ နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းထွေးထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ သတင်း မီဒီ ယာများကို လက်ရှိ အချိန်တွင် မပြောချင်သေးကြောင်း ဆိုသည်။ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးဝင်းကမူ ဗုံးတလုံး ထပ်တွေ့ ရှိမှု မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဦးသိန်းထွေးမှာလည်း အိမ်တွင် ဆက်လက် နေထိုင်ပြီး ရုံးလည်း ပုံမှန်တက်ရောက် နေကြောင်း ပြောသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/21/230230.html
မော်လမြိုင် အမှတ်(၁)ဈေးကြီးတွင် ပိတ်ထားရသော ဆိုင်ရှင်များတောင်းဆိုလာသဖြင့် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မနက်ပိုင်းတွင် ဈေးရုံ B နှင့် C ကိုခွင့်ပြုပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဈေးရုံ A နှင့် D ကို ယာယီထုတ်ယူခွင့်ပြုထားကြောင်း ဈေးတာဝန်ခံရုံးမှသိရသည်။
ဈေးတာဝန်ခံ ဦးစိုးလွင်က“သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားပြီးတော့ အိမ်ကနေတစ်ဆင့် ဖောက်သည်တွေကို ပြန်ပြီးပေးလို့ရ အောင် စီစဉ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ သူတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့မိသားစုအဆင်ပြေအောင် နှစ်ဖက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားပြီး ယာယီ ခွင့်ပြုထားပေးတာ”ဟု ပြောသည်။ မော်လမြိုင်အမှတ်(၁)ဈေးကြီးမှာ မွန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်၊ကျေးရွာအချို့တို့မှ ကုန်ပစ္စည်း များကို လက်လီ၊လက်ကား ဖောက်သည်ယူရောင်းချမှုများရှိသည့်အတွက် ပိတ်ထားရသည့်ဆိုင်များ အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေပြီး ယခုလိုခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက် အနည်းငယ်အဆင်ပြေမှုရှိကြောင်း ဆိုင်ရှင်အချို့က ဆိုသည်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာသည့်အတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်နှင့် ဆေးဆိုင်များကိုသာဖွင့်ခွင့်ပြုထားပြီး ပိတ်ထားသည့်ဆိုင်ခန်များက စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး တစ်ပတ်တစ်ရက်နှုန်းဖြင့် ပစ္စည်းများထုတ်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ ဈေးတာဝန်ခံရှိတယ် ဈေးတာဝန်ခံကနေပြီးတော့ မြို့နယ်စည်ပင်ကိုတင်ပြတယ် အခက် အခဲလေးတွေဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာ ရက်နည်းနည်းကြာနေပြီး ဒီပိတ်ထားတာလဲ။ ပစ္စည်းတွေပျက်စီးမှာစိုးလို့ ထုတ်ခွင့်ပြုဖို့ ဆိုင်တွေစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုရင်တော့လဲ လုပ်ပေးပါတယ်” ဟု မော်လမြိုင် အမှတ်(၁) ဈေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးမောင်စိုးမှ ဆိုသည်။
မော်လမြိုင်မြို့ပေါ် Stay at home ရပ်ကွက်သတ်မှတ်နေရာရှိ ဈေးများတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အခြေခံစားသောက်ကုန်များသာ ရောင်းချသည့်ဆိုင်များကိုသာ ရောင်းချခွင့်ပြုကြောင်း မွန်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/09/19/%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%ac %e1%80%ba%e1%8
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ နိုင်ငံရေးအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အတွက် အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမဲပေးဖို့ ကရင်နီ အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးက တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ အမျိုးသမီးမပါဝင်တဲ့ အပြင် နိုင်ငံရေး အဆုံး အဖြတ် ပေးတဲ့နေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်မှု အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကို အခုလို တိုက်တွန်းရတာလို့ ကရင်နီအမျိုးသမီး အစည်းအရုံး အတွင်းရေးမှူး ၂ မော်ဖရေးမြာက ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့ ကရင်နီပြည်နယ်မှာ ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ပြောပြော၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာပဲ ပြောပြော အမျိုးသမီးပါဝင်မှုက ကိုယ်မှန်းထားသလောက် မရောက်နေသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီလာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေက ပါဝင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ ကျမတို့က vote for women လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
”ဒီအစီအစဉ်ကို ဩဂုတ်လကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် အမျိုးသမီးတွေကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးတာအပြင် ပြည်နယ်အတွင်းက လူထုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မိမိကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် အမျိုးသမီးတွေကို မဲပေးဖို့ စည်းရုံးဟောပြောတာ တွေလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသမီးတွေအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်နယ်အတွက် အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းမှာလည်း အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်း အမျိုးသမီး အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/ archives/411923
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့မှ ငွေတောင်ပေါက်တံတားအနီးတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်၊ ည ၈ နာရီ အချိန်က ဒေသခံ နှစ်ဦး သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ မြောက်ဦးမြို့ ဘီးလူးကန်ရပ်ကွက်နေ ဦးထွန်းထွန်းမြင့် ၃၄ နှစ်နှင့် ဆင်ချဆိပ်ရပ်ကွက်နေ ဦးထွန်းငြိမ်း ၃၃ နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ဦးဆေးရုံကြီးရှေ့ရှိ မြောင်၌ ငါးမြုံးထောင်ပြီးအပြန် ငွေတောင်ပေါက်တံတားအနီးအရောက်တွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ သေနတ်ဖြင့် ၈ ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ ဦးထွန်းထွန်းမြင့်က ပြောသည်။“ကျွန်တော့ပေါင်ကို ကျည်ထိတော့ လဲကျသွားပြီး ထလို့မရလိုက်တော့ဘူး။ အဲ့မှာကျနော့်ကလှိမ့်ပြီးတော့ ချောင်းထဲကိုရောက်သွားတာပါ။ ကျွန်တော့ ညီကိုတော့ခေါ်သွားကြတယ်။ သူ့အော်သံကိုလည်း ကြားလိုက်ရတယ်။ ရိုက်တဲ့အသံတွေကိုလည်း ကျွန်တော့ နားနဲ့ ကြားလိုက်တယ်”ဟု ဦးထွန်းထွန်းမြင့်က ဆိုသည်။
မြောက်ဦးမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန်က ငွေတောက်ပေါက်တံတားအနီးတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး အသေးစိတ်ကို မသိရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသူနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြောက်ဦးမြို့မရဲစခန်းအား DMG က ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းစက်ပိတ်ထားသဖြင့် အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75665
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 (ခေါ်) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကူးစက်မူ့မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးရာတွင် ကူးစက်မူမရှိစေရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲအတွင်းရေးမူး ဦးလင်းကျော်က ပြောသည်။ ချင်းပြည်နယ်တွင် ကူးစက်မြန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ကူးစက်မူပြန်ဖြစ်ပွား လာခြင်းကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ပြင်ဆင်မူမေးမြန်းခြင်းကို ဦးလင်းကျော်က ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးလင်းကျော် ”ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကတော့ မဲရုံပိုင်းနဲ့ မဲရုံတာဝန်ကျတဲ့သူ အပိုင်းကို ပြင်ဆင်တာပေါ့၊ ပစ္စည်းပိုင်းက တော့ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါ် မူတည်မယ်၊ မဲဆန္ဒရှင် ၁၀၀ ရှိတဲ့နေရာဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်နဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမယ်၊ ပြီးတော့ ၁၀၀ နဲ့ ၅၀၀ ကြားဆိုရင်တော့ အခန်းကျယ်တဲ့နေရာကို ရွေးပြီးတော့ ဆိုဒ် ၂ ဆိုဒ် လုပ်ဆောင်သွားမယ်၊ အဲ့ဒီအတွက် အခန်းကျယ်နဲ့ နေရာကျယ်ကို ရွေးချယ်သွားမယ်၊ ဆိုဒ် နှစ် ဆိုဒ်လုပ်မယ်၊ မဲပေးတာ လည်း မြန်မှာပေါ့“ ဟု ပြောသည်။
” ၂၀၁၅ မှာတုန်းကတော့ ၁၀၃၁ ရုံထိမဲရုံတွေ လုပ်ဆောင်တယ်၊ အခု ၂၀၂၀ လက်ရှိအနေအထားမှာကတော့ ၁၁၁၄ ရုံထိပြင်ဆင်ထားတယ်၊ ရဲဌာနကနေ ဘယ်လောက်ထိ ကူညီပေးမလဲဆိုတော့ မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အထဲမှာ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုတဲ့သူတွေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုကတော့ အသေးစိတ် ဆွေးနွေး ပြီးပြီ၊ သူတို့ကတော့ မဲရုံကိစ္စတွေကို အကုန်လုံးစီမံပေးမယ်၊ ဟု ဆိုသည်။ လာမည့် ၂၀၂ဝခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်အရ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၃၄၀၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75672
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း မကြာသေးမီက ရောက်ရှိလာကြသော စစ်ရှောင် တစ်ထောင်နီးပါးအတွက် အရေးပေါ် အကူအညီများလိုအပ်နေသည်ဟု အကူအညီပေးနေသူများက ပြောသည်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်က မဟာမုနိ ဘုရားဝန်းအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၆ ရွာက စစ်ရှောင် တစ်ထောင်နီးပါး ရောက်ရှိနေပြီး ၎င်းတို့အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ၊ COVID-19 ကာကွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ယာယီတဲများဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အကူအညီများ လိုအပ်နေ သည်ဟု စစ်ရှောင်များအား ကူညီနေ သူ များက ပြောသည်။
“လူဦးရေ တစ်ထောင်ဝန်းကျင်ပေါ့၊ ၉၄၃ ဦးလို့တော့ ပြောတယ်။ အခုရောက်နေတာက မဟာမုနိ ဓမ္မာရုံရယ်၊ မဟာမုနိ ပုရဝုဏ်အတွင်းမှာ။ မျောက်တောင်၊ သာစည်ရယ်၊ ရွှေပြည်သစ်၊ ရွှေပြည်ရွာဟောင်း၊ အလယ်ကျွန်း၊ ကျောက်ဂူစုရွာ အဲ့က လူတွေပဲ။ သူတို့က နေရာက ကျပ်သည်းမှုတွေရှိနေတယ်။ လူကများတယ်လေ။ ပြီးတော့သူတို့ အခု စားနပ်ရိက္ခာ လိုတယ်။ ပြီးတော့ COVID-19 အတွက် အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ လိုအပ်နေတယ်။ သူတို့ ဒီကိုရောက်နေတာ နှစ်ပတ်ကျော်ပြီ” စစ်ရှောင်များအား ကူညီပေးနေသူ ကျော်တော်မြို့ က ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် “လိုအပ်တာက စားနပ်ရိက္ခာရယ်၊ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေ လိုတယ်။ လောလောဆယ်က COVID ကာလလည်း ဖြစ်တော့ ပိုပြီး လိုအပ်တာပေါ့။ Mask တို့ ဘာတို့လိုတာပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့က စားဝတ်နေရေး၊ နေစရာမရှိ အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ ကူညီထားတာပါ။ အစကတော့ ဓမ္မာရုံမှာထားတယ်။ မဆံ့တော့ နောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ အဲ့နားက မဟာမုနိ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထားတယ်။ နောက်ဓမ္မရုံ သုံးရုံမှာ မျှပြီးတော့ ထားပါတယ်။ အခက်အခဲက နေရာထိုင်ခင်းအခက် အခဲဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး အဝတ်အထည် အခက်အခဲရှိတယ်”ဟု စစ်ရှောင်များအား ယာယီကူညီရေးကော်မတီ၏ နာယက ဆရာတော် ဦးပညာသီရိ က မိန့်ကြားသည်။
အဆိုပါ စစ်ရှောင်များမှာ အနီးအနားတွင် တစ်စုံတစ်ရာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ ကျေးရွာများထဲသို့ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက ဝင်ရောက်လာပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စစ်ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးလာကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် ဒေသခံများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ပြောဆိုခဲ့သည် လက်ရှိ မဟာမုနိဘုရားဝန်း အတွင်းရောက်ရှိနေသော စစ်ရှောင်အများစုမှ ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ သာစည် ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ကျေးရွာအချို့မှ ဒေသခံ ရွာသားများ ဖြစ်ကြပြီး အချို့မှာ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ရွှေပြည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး ခံခဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-75621
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၂ ပါတီရှိသည့်အနက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာဖြင့် မဲဆန္ဒနယ် တစ်ထောင်ကျော် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီ သုံးပါတီသာ ရှိပြီး ပါတီ ၅၀ ကျော်က မဲဆန္ဒနယ် ၁၀ နေရာ ထက် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က ပြုလုပ်သည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် သတင်း မီဒီယာများ အခန်းကဏ္ဍ အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်က ယင်းသို့ ပြန်လည်ဖြေကြား ခြင်းဖြစ်သည်။“တကယ်တမ်း တစ်ထောင်ကျော် ဝင်တာက သုံးပါတီပဲ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ ပါတီပေါင်း ၉၂ ပါတီ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်တယ်ဆိုသော်လည်း ပါတီအများစုက နေရာအနည်းတွေပဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ တွေ့ရတယ်”ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ပြောကြားသည်။နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသည် ပါတီတည် ထောင်ပြီးနောက် အနီးစပ်ဆုံးရွေးကောက် ပွဲတစ်ခုတွင် မဲဆန္ဒအနည်းဆုံး သုံးနေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ဥပဒေကန့်သတ်ချက်ရှိရာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို မဲဆန္ဒ နယ် ၁၀ နေရာ အများဆုံး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပါတီ ၅၁ ပါတီရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စာရင်းအရ တည်ဆဲနိုင်ငံရေးပါတီ ၉၄ ပါတီ ရှိသော်လည်း ကော်မရှင်ညွှန်ကြား ချက်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း မရှိ၍ ယာယီဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ပါတီအချို့ရှိကြောင်းသိရသည်။ ကော်မရှင်စာရင်းများအရ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေ အများဆုံး ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပါတီသုံးခုမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၊ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) တို့ဖြစ်သည်။ NLD ပါတီနှင့် UDP ပါတီမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၄၃ ဦးဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းဦးရေအများဆုံး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး USDP ပါတီမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၁၂၉ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/193299
၁။ RCSS ဖမျးထားသူ လှတျပေးဖို့ တအာငျးပါတီ တောငျးဆို
၂။ မွနျမာ့ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှငျ ကယျြပွနျ့သညျ့ ပါဝငျမှုဖွငျ့ လေးနကျစှာလုပျဆောငျရနျ KNU တိုကျတှနျး
၃။ ကြောကျတျော၊ကြေးရှာ ၂ ခု မီးရှို့ ခံရမှုတှငျ ယမျးထုပျမြားနှငျ့ ယူနီဖောငျးမြား သိမျး ဆညျးရထားဟု AHRDPA ပွော
၄။ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျသညျ KNU မူဝါဒနှငျ့ သှဖေညျနပွေီးဖွဈ၍ ပွနျလညျတညျ့မတျဖို့လိုအပျဟု KNU Concerned Group ပွော
၅။ လပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ ရေးမွို့နယျ ငါးမြှားစခနျးတှငျ ငါးလှနျးစငျမြားနှငျ့ နအေိမျအခြို့ပကျြစီး
၆။ ဖာပှနျတှငျ ကွံ့ခိုငျရေး ကွီးစိုးသညျ့ အစဉျအလာကို ထိုးဖောကျမညျဟု KNDP ကိုယျစားလှယျလောငျး ပွော
၇။ သီပေါ ကြားဖွူ ပါတီ ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရ
၈။ ကရငျနီလူငယျအငျအားစုမြားက ကယားပွညျနယျဒီမိုကရကျတဈပါတီ အောငျနိုငျရေးအတှကျ ဝနျးရံ၍ ရှားတောမွို့ နယျ ကြေးရှာမြား၌ မဲဆှယျစညျးရုံး
၉။ တောငျကွီးမွို့ ပွညျတှငျးစဈ ဆနျ့ကငျြကွ Photo Campaing ပွုလုပျ
၁၀။ ပွညျတှငျးစဈမြား ရပျတနျ့ရနျ ကခငျြအမြိုးသားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့တောငျးဆို
၁၁။ ကြိုကျမရောမွို့နယျ NLD ဆိုငျးဘုတျဖကျြဆီးသူ ကွအေေးတောငျးပနျခွငျးမပွုသဖွငျ့ ဖမျးဆီးအရေးယူ
၁၂။ မိုငျးလားမွို့မှ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား (၆၀)ကြျော တောငျကွီးရောကျ
၁၃။ မှနျနှငျ့ကရငျပွညျနယျအပွငျ ရနျကုနျ ဧရာဝတီ တနင်ျသာရီတိုငျးတို့တှငျ မှနျအမြိုးသမီးကိုယျစားလှယျလောငျးမြား မဲဆှယျစညျးရုံးရေးစတငျ
၁၄။ သြှမျးမွောကျ သတျဖွတျခံရသညျ့ အရပျသားမြားအတှကျ အမှုမှနျ မဖွဈသေး
၁၅။ ကအေဲနျယူ သထုံခရိုငျ ကိုဗဈကာကှယျရေးဂိတျဖှငျ့လှဈမှုအပျေါ အစိုးရတပျဟနျ့တား
၁၆။ မယျစဲ့တှငျ မဲဆှယျပှဲ ရကျတိုကျနကွေောငျး NLD တငျပွမှုကွောငျ့ ကျောမရှငျက ရကျမြား ပွောငျးလဲ
၁၇။ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတောငျပိုငျး ညောငျခြောငျးအနီး မယေုတောငျကြျောလမျးတှငျ ၂ ရကျဆကျတိုကျ တိုကျပှဲဖွဈ
၁၈။ ကိုဗဈကာလ သြှမျးမွောကျ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရမှု မွငျ့တကျ HST-NSS ထောကျပွ
၁၉။ နပွေညျတျော ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ ခှဲ ဥက်ကဌ အိမျတှငျ လကျပဈဗုံးတလုံး ထပျတှေ့
၂၀။ မျောလမွိုငျ အမှတျ(၁)ဈေးကွီးတှငျ ပိတျထားသညျ့ဆိုငျခနျးပစ်စညျးမြား ယာယီထုတျယူခှငျ့ပွု
၂၁။ အမြိုးသမီးကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို မဲပေးရနျ ကရငျနီအမြိုးသမီးအစညျးအရုံးတိုကျတှနျး
၂၂။ မွောကျဦးတှငျ ပဈခတျခံရပွီး ဒသေခံတဈဦးဒဏျရာရ၊ တဈဦးမှာ ဖမျးဆီးခံထားရ
၂၃။ ရှေးကောကျပှဲအတှငျး ကူးစကျမူမရှိစရေနျမဲရုံတိုးခြဲ့ ပွငျဆငျနဟေုဆို
၂၄။ စဈရှောငျအသဈ တဈထောငျခနျ့ အကူအညီမြား လိုအပျ
၂၅။ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသညျ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၉၂ ပါတီ ရှိသညျ့အနကျ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာဖွငျ့ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျမညျ့ပါတီ သုံးပါတီသာရှိ
ရှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ RCSS/SSA တပျဖှဲ့က ထိနျးသိမျးထားတဲ့ ရှမျးပွညျတောငျပိုငျး မိုငျးကိုငျမွို့နယျ ခေးအုံအှကြေ့ေးရှာအုပျစု ဒသေခံ မိုငျးလှစိနျကို ပွနျလှတျပေးဖို့ တအာငျး(ပလောငျ)အမြိုးသားပါတီက တောငျးဆိုလိုကျပါ တယျ။ စကျတငျဘာ ၁၅ ရကျနမှေ့ာ ချေါယူထိနျးသိမျးထားတာလို့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ တအာငျး(ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ မိုငျးနုမျဟနျက RFA ကို ပွောပါတယျ။
စကျတငျဘာလ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ RCSS တပျဖှဲ့ဝငျတှေ ပနျမှမျးရှာကို ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ မှိုရှာဖို့ တောထဲ သှားတဲ့ မိုငျးလှစိနျကို ရှာအပွငျလမျးမှာ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားတာလို့ ဆိုပါတယျ။ မိသားစုဝငျတှကေတော့ တောထဲမှာ အဖမျးခံထားရတဲ့ မိုငျးလှစိနျနဲ့ တှခှေ့ငျ့ရခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ မိုငျးလှစိနျကို သံသယရှိလို့ ချေါယူစဈဆေးရာမှာ မူးယဈဆေး သုံးစှဲကွောငျးတှရေ့လို့ ထိနျးသိမျးထားတာလို့ RCSS ပွောခှငျ့ရသူ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးအှမျခေးက RFA ကို ပွောပါတယျ။ သူ့ကို ဘယျတော့ပွနျလှတျမလဲလို့ မေးမွနျးရာမှာတော့ မူးယဈဆေးသုံးစှဲမှု အခွအေနေ စဈဆေးခကျြအရ ထှကျလာတဲ့ အဖွအေပျေါမှာ မူတညျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မိုငျးလှစိနျဟာ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ တအာငျး(ပလောငျ)အမြိုးသားပါတီ အောငျနိုငျရေးအတှကျ ကူညီနသေူတဈဦးဖွဈပွီး ပါတီဝငျဟောငျးတဈဦးလညျး ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ တအာငျးလူမြိုးတှေ နထေိုငျမှုမြားတဲ့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျမှာ တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသားပါတီက မဲဆန်ဒနယျအားလုံးမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဒသေတှငျး လှုပျရှားနတေဲ့ RCSS တပျမှူးက ဝငျမပွိုငျဖို့ ဖိအားပေးတယျလို့ မိုငျးကိုငျမွို့နယျ ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ မိုငျးနုမျဟနျက ပွောပါတယျ။ ပါတီဆိုငျးဘုတျ တှေ စိုကျထူတဲ့နရောမှာလညျး ဟနျ့တားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
တအာငျး(ပလောငျ)အမြိုးသားပါတီ ဗဟိုအတှငျးရေးမှူး မိုငျးအုဏျခိုငျက မိုငျးကိုငျမွို့နယျက အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ သကျဆိုငျရာ ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနဲ့ တာဝနျရှိသူတှကေို အကွောငျးကွားဖို့ စီစဉျထားပွီး ပါတီဗဟို တာဝနျရှိသူတှေ သှားရောကျဆှေးနှေးမယျ့ အခွအေနရှေိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ မိုငျးကိုငျမွို့နယျမှာ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျတို့ ရှေးကောကျပှဲဝငျကွမှာပါ။ https://www.rfa.org/burmese/ne ws/tnp-party-demands-release-rcss-detainee-09212020062725.html
မွနျမာ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျကို ပကတိ အခွအေနနှေငျ့ကိုကျညီအောငျ ပွငျဆငျမှမျးမံပွီး ကယျြပွနျ့သညျ့ ပါဝငျမှုဖွငျ့ လေးနကျစှာ လုပျဆောငျရနျ ကရငျအမြိုးအသားအစညျးအရုံး-KNUက ယနေ့ (စကျတငျဘာ ၂၁) တှငျ ကရြောကျသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနတှေ့ငျ တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ တိုကျပှဲဖွဈနသေညျ့ တိုငျးရငျးသားတျောလှနျရေးအဖှဲ့ အစညျးမြားအားလုံး ငွိမျခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျတှငျ ပါဝငျရမညျဖွဈပွီး ဖယျကွဉျထားခွငျးခံရသညျ့ လူထုအခွပွေု အဖှဲ့အစညျး မြား၊ ပါတီအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ပါဝငျမှု ကို လညျး သခြောစရေနျ လိုအပျကွောငျး ယနေ့ ငွိမျးခမျြးရေးနအေ့ပျေါ ထုတျပွနျသညျ့ KNU ၏ သဘောထား ထုတျပွနျခကျြ၌ ဆိုထားသညျ။“ အပွနျအလှနျလေးစားကာ ဖိအားပေးလိုကျလြောစမှေုကငျးပွီး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေး အဖွရှောသညျ့ ရလဒျကိုအခွခေံသညျ့ လုပျငနျးစဉျဖွဈရပါမညျ”ဟု ၎င်းငျးတို့၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွ ထားသညျ။
ရခိုငျ၊ ခငျြးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျပှဲမြားအတှငျး တပျမတျော၏ လူနညျးစုအပျေါ အကွမျးဖကျလုပျရပျမြားကြူးလှနျနမှေုနှငျ့ ၎င်းငျးကြူးလှနျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ လကျရှိအစိုးရ၏ လဈြလြူရှုထားမှုအပျေါ ကနျ့ကှကျရှုတျခကြွောငျး ကရငျလူငယျကှနျယကျ(KYN)မှ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလ ၁၉ရကျ နကေ့ ထုတျပွနျသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနအေ့တှကျ သဘောထားထုတျပွနျခကျြတှငျလညျး ပွောဆို ထားသညျ။
နှဈစဉျ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနကေို့ ယခငျနှဈမြားက မွနျမာပွညျဒသေအခြို့တှငျ အခမျးအနားမြားပွုလုပျကငျြးပလရှေိ့သျောလညျး လကျရှိကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကရြောကျမှု အခွေ အနမြေားကွောငျ့ လူစုလူဝေး အခမျးအနားမြားကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိဘဲ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြား အသီးသီးမှ သဘောထား ကွညောခကျြမြား အသီးသီး ထုတျပွနျကွညောကွသညျ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနကေို့ ၁၉၈၂ ခုနှဈတှငျ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ စတငျကငျြးပခဲ့ပွီး ၂၀၀၁ ခုနှဈတှငျ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂမှ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျနအေ့ား တရားဝငျကငျြးပသညျ့နအေ့ဖွဈ သတျမှတျ ခဲ့သညျ။ ယနကေ့ရြောကျသညျ့ (၃၉) ကွိမျမွောကျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနေ့ အတှကျ ကမ်ဘာ့ ကုလ သမဂ်ဂမှ အတူတကှ ငွိမျးခမျြးရေးကို ဖျောဆောငျခွငျး(Shaping Peace Together) ဟူ၍ ဆောငျပုဒျခြ မှတျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%94%e1 %80%b9%e1%80%99%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ဘုရားပေါငျးကြေးရှာနှငျ့တောငျပေါကျကြေးရှာမီးရှိုခံရမှုတှငျ အိမျမီးရှို့ရာတှငျ အသုံးပွု ခဲ့သညျ့ ယမျးထုပျမြား၊ ယူနီဖောငျးမြားကို သိမျးဆညျးရမိထားကွောငျး ရခိုငျလူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျမွှငျ့တငျသူ မြားအဖှဲ့ (AHRDPA) မှ ဒါရိုကျတာဦးမွတျထှနျးက ရနျကုနျခတျေသဈသတငျးဌာနသို့ ပွောဆိုသညျ။
“ဘုရားပေါငျးက ၉၇ ဆောငျ၊ တောငျပေါကျဆိုရငျ ၆၇ ဆောငျအကုနျလုံး ၁၀၀ ကြျောမီးတိုကျခံရတဲ့အခါကတြော့ အမြားဆန်ဒကို ယူပွီးလုပျရမှာပါ။ တခြို့အိမျတှဆေိုရငျ အိမျကွီးတှပေါသှားတယျ။ အိမျသေးသေးလေးတှကေို မီးမရှို့ခဲ့ဘူး။ နောကျပွီးတော့ သကျသခေံပစ်စညျးက သူတို့မှာ မီးရှို့ဖို့ ပါလာတဲ့ ယမျးထုပျတှေ ဘာတှပေါလာတယျ။ ယမျးထုပျတှေ တှဲပွီး တော့ တမငျတကာ ရညျရှယျပွီးတော့ မီးတိုကျတာ။ အဲဒီဟာလေး သကျသခေံ ပစ်စညျးသိမျးဆညျးရလို့တော့ရှိပါတယျ။ သိမျးထားပါတယျ။ ရဲလညျးပါတယျ။ တပျလညျးပါတယျ။ တခြို့ဆိုရငျ ရဲက ယူနီဖောငျးတှေ အင်ျကြီတှေ မကေ့နျြနခေဲ့တာ တှလေညျးရှိတယျ။ အဲဒီဟာတှကေိုလညျး သိမျးထားပါတယျ”ဟု ဦးမွတျထှနျးက ပွောဆိုသညျ။ AHRDPAက ယငျးကြေးရှာ ၂ ခုသို့ ကှငျးဆငျးစဈဆေးမှုမြား လုပျဆောငျခဲ့ပွီးစကျတငျ ဘာလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ နအေိမျဆုံးရှုံးခဲ့သူ ဘုရားပေါငျး ကြေးရှာသား ဦးမောငျမောငျသနျး ၏ ပွောဆိုခကျြ ဗီဒီယို၊ စကျတငျဘာလ ၁၄ ရကျနတှေ့ငျ နအေိမျမီးရှိုခံခဲ့ရသူ တောငျပေါကျကြေးရှာမှ ဦးခိုငျတို့၏ ပွောဆိုခကျြကို ဗီဒီယိုဖိုငျနှငျ့တကှ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။
တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနေ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြတှငျမူ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ဘုရားပေါငျးကြေးရှာနှငျ့ တောငျပေါကျကြေးရှာတို့အား တပျမတျောက ရှာလုံးကြှတျ မီးရှို့ခဲ့သညျဆိုသညျ့ သတငျးမှားမြား ကိုအဖှဲ့အစညျးတခြို့က လုပျကွံသတငျးမြား ဖွနျ့ဝလေကျြရှိကွောငျး၊ AA က မီးရှို့ခွငျးဖွဈနိုငျကွောငျး ထုတျပွနျထားသညျ။ https://www.khitthitnews.com/ 2020/09/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%b1% e1%80%ac%e1%80
လတျတလော ဖျောဆောငျနဆေဲ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျသညျ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး-KNU၏ ခမြှတျထားသညျ့ မူဝါဒ လမျးစဉျမြားနှငျ့ လုံးဝသှဖေညျနပွေီးဖွဈ၍ ပွနျလညျတညျ့မတျရနျလိုအပျပွီဟု KNU Concerned Group က ပွောဆို လိုကျသညျ။ ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံ ၂၁ရာစု ပငျလုံ စတုတ်ထ အစညျးအဝေးမှ နောကျဆုံးထှကျရှိလာသညျ့ ရလဒျမြားအပျေါ အခွခေံ၍ စကျတငျဘာလ ၁၄ရကျမှ ၁၆ရကျနအေ့ထိ ပွုလုပျခဲ့သညျ့ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ နယျစပျရှိ ကရငျ မြားပါဝငျသော ၎င်းငျးတို့၏ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျအပျေါသုံးသပျမှု အှနျလိုငျးအစညျးအဝေးအပွီး ထိုသို့ ပွောဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။
လကျရှိ နောကျဆုံးထှကျပျေါလာသညျ့ ပွညျထောငျစု သဘောတူညီခကျြမြားပါ အခကျြအလကျမြားအရ NCA အကောငျအ ထညျဖျောမှုအတိုငျး ရှဆေ့ကျသှားရာတှငျ ရှဆေ့ကျငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ၏ အဆုံးသတျသညျ့ လကျနကျကိုငျလမျး စဉျစှနျ့လှတျ၍ ဥပဒေ ဘောငျအတှငျးသှားရနျသာ ဦးတညျနကွေောငျး အဖှဲ့၏ ပွောခှငျ့ရ KNU ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဟောငျး ပဒိုနျောစီ ဖိုးရာစိနျက ယခုလို ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ ဒီ NCA လမျးစဉျအတိုငျး ရှဆေ့ကျသှားမယျဆိုရငျ နောကျဆုံးက လကျနကျကိုငျ လမျးစဉျစှနျ့လှတျ ရေးကိုပဲ ရောကျသှားမှာပဲ။ ဒါက ကမြတို့ ကအေဲနျယူ ခမြှတျထားခဲ့တဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေးမူ၊ လမျးစဉျ တှေ စောဘဦးကွီးရဲ့ မူဝါဒ လမျးစဉျတှနေဲ့ အကုနျဆနျ့ကငျြနတော ပဲဖွဈတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
၃ ရကျတာ ပွုလုပျခဲ့သညျ့ ယငျးအှနျလိုငျးအစညျးအဝေးတှငျ ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပငျလုံ စတုတ်ထ အကွိမျအစညျးအဝေး ရလဒျအား သုံးသပျခွငျး၊ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ ( အဲနျစီအေ) နှငျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှုဆိုငျရာ မူဘောငျအား သုံးသပျခွငျး၊ ကရငျ့တျောလှနျရေး အခွခေံလမျးစဉျနှငျ့ အနာဂတျ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစု ဖှဲ့စညျးပုံဆိုငျရာ အခွခေံမူ စသညျတို့ကို အဓိက ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။ KNU Concerned Group သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဇှနျလပိုငျးတှငျ ယခငျ ကအေဲနျယူ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ပဒိုနျောစီဖိုး ရာစိနျပါဝငျသညျ့ ကအေဲနျယူ ခေါငျးဆောငျဟောငျးအခြို့တို့ ဦးဆောငျဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ၎င်းငျးတို့၏ စိုးရိမျခကျြ မြား၊ ရပျတညျခကျြမြားကို အလငျြးသငျ့သလို သဘောထား ထုတျပွနျမှုမြားပွုလုပျသညျ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈသညျ။ http://kicn ews.org/2020/09/%e1%81%bf%e1%80%84%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80
ရေးမွို့နယျမွောကျပိုငျး အံဒငျကြေးရှာအုပျစု ငါးမြှားစခနျးကြေးရှာ၌ စကျတငျဘာ ၂၀ ရကျနေ့ နံနကျစောစောအခြိနျခနျ့တှငျ လပွေငျးတိုကျခတျမှုနှငျ့ ဒီရတေိုကျစားမှုတို့ကွောငျ့ ငါးလှနျးစငျမြားနှငျ့ နအေိမျအခြို့ ပွိုကပြကျြစီးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိ သညျ။ နံနကျ ၁ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ လပွေငျးစတိုကျခတျခဲ့ပွီး ငါးလှနျးစငျ ၂၀ ကြျော ပွိုကပြကျြစီးသှားကွောငျး ငါးမြှားစခနျး ကြေးရှာ အတှငျးရေးမှူး နိုငျဝငျးက ပွောသညျ။“ဒီ ၁၉ ရကျနေ့၊ ည ၁ နာရီကြျောလောကျမှာ ဒီရလေညျးတကျတယျ လပွေငျးလညျးတိုကျတော့ ငါးလှနျးစငျ ၂၀ စငျလောကျတော့ ပကျြစီးသှားတယျ၊ ဆုံရှုံးမှုတနျဖိုးကတော့ စငျတဈစငျဆိုရငျ သိနျး ၂၀၊ ၃၀ လောကျကမြယျ။ ခုကနြျောတို့ စာရငျးလိုကျကောကျနတေယျ ခနျ့မှနျးခွအေရဆို ဆုံးရှုံးမှုတနျဖိုးအားလုံး သိနျး ၂၀၀ ဝနျးကငျြလောကျရှိမယျ” ဟု နိုငျဝငျးက ဆိုသညျ။
ငါးမြှားစခနျးကြေးရှာတှငျ အိမျခွေ ၃၀၀ ကြျောရှိပွီး၊ တံငါလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျနကွေသော အလုပျသမားမြားသညျ နအေိမျ နှငျ့ ငါးလှနျးစငျ တှဲကပျလကျြပွီးနထေိုငျကွကွောငျး၊ ယငျးကြေးရှာ၌ ငါးလှနျးစငျ စုစုပေါငျး ၅၀ စငျကြျောရှိကွောငျး သိရ သညျ။ လပွေငျးတိုကျခတျမှု၌ ငါးလှနျးစငျပကျြစီးသှားသူ မိဇာလေးက “ခုဆိုမိုးလညျးကုနျခါနီးပွီးဆိုတော့ ရမေလာတော့ ဘူးထငျလို့ ငါးလှနျးစငျတှထေုတျကွတာပေါ့ ခုတော့အားလုံးကုနျသှားတာ ရကေတော့ ထပျပွီးတော့ စိုးရိမျနရေသေးတယျ။ ပငျလယျကလညျး ငါးဖမျးခှငျ့ပိတျထားတာဆိုတော့ အလုပျသမားခတို့ စားဝတျနရေေးတို့ကတော့ ခကျခဲဖွဈတာပေါ့နျော။ အလုပျကလညျးအဆငျမပွတေော့ ခုကအသဈပွနျရငျးဖို့က အခကျခဲဖွဈတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ရှိသလောကျနဲ့ ပွနျလုပျရတာပေါ့ ငှရေေးကွေးရေးကတော့ တအားခကျခဲဖွဈတာပေါ့” ဟု ၎င်းငျးက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။
ထို့အတူ စကျတငျဘာလ ၂၀၊ နံနကျ ၄ နာရီခနျ့၌ ပေါငျမွို့နယျ အလှပျကြေးရှာအုပျစု တောငျပိုငျးကြေးရှာတှငျ ပငျလယျ ဒီရတေိုကျစားမှုကွောငျ့ ပငျလယျရတေားတမံတဈခုနှငျ့ လူနအေိမျ ၄ လုံးပကျြစီးသှားကွောငျး သိရသညျ။ အလားတူ သံဖွူဇရပျမွို့နယျ စကျစဲကမျးခွေ၊ မွအဏ်ဏဝါ စားသောကျဆိုငျ ဝငျးရှတှေ့ငျ စကျတငျဘာ ၂၀ ရကျ မှနျးလှဲပိုငျးအခြိနျခနျ့က မိုးသညျးထနျစှာရှာသှနျးပွီး လပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ သဈပငျတဈပငျ ပွိုလဲကခြဲ့သဖွငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး သဈပငျပိ၍ ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ သွဂုတျလ ၂ ရကျနေ့၊ ကုလားဂုတျကြှနျး အပျေါဆိပျအနီး (ပသြှူး ခြောငျး) ၌လညျး လပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ နအေိမျ (၄၀) ကြျောပကျြစီးခဲ့ပွီး၊ ဆုံးရှုံးမှုတနျဖိုး သိနျး (၁) ထောငျကြျောရှိ ကွောငျး သိရသညျ။ http://burmese.monnew s.org/20 20/09/21/%e1%80%9c%e1%80%b1%e1%8%95%e 1%80%bc%e1%
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖာပှနျမွို့နယျတှငျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ ကွီးစိုးနသေညျ့ အစဉျအလာကို ထိုးဖောကျ မညျဟု ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ (KNDP) ဖာပှနျမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော အမှတျ ၂ ကိုယျစားလှယျ လောငျး နျောသဇငျတုပျ က ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ “ဖာပှနျမှာစညျးရုံးရေး ဆငျးတော့ ကိုယျ့ဖကျတခြို့ပွနျပါလာတယျ။ အမြိုးသမီးကိုယျစားလှယျလညျး ဖွဈတော့။ အရငျက ရှေးကောကျပှဲ အတှအေ့ကွုံမရှိပမေဲ့ ကွံခိုငျရေး ကွီးစိုးတဲ့အစဉျ အလာကို ထိုးဖောကျ သှားမယျ။ ကရငျပါတီအတှကျ အခွကေုတျတခုခုရဖို့ ရညျရှယျထားတယျ” ဟု သူမက ပွောသညျ။
ဖာပှနျတှငျ ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး ထိနျးခြုပျနယျမွေ အမြားအပွားရှိသညျ့အတှကျ မွို့ပျေါ အနီးတဝိုကျ တှငျသာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျပွီး ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေး ပါတီ က ရာနှုနျးပွညျ့ အနိုငျရရှိခဲ့သညျ့ နယျမွဖွေဈသညျ။
“ အခုတခေါကျပွောနကွေတာရှိတယျ၊ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အလှညျ့လို့လေ။ ကနြျောတို့တော့ ဒီလိုမ မှတျယူ ထားဘူး။ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားမယျ။ ရတာ မရတာ တဈပိုငျးပေါ့၊ ကိုယျလုပျနိုငျသလောကျ လုပျသှားမယျ” ဟု KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ပွောသညျ။ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဖာပှနျမွို့နယျ၌ ကရငျအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျတို့ ရာနှုနျး ပွညျ့ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/09/%e1%80 %96%e1%80 %ac%e1%80%95% e1%80%bc%e1%80%94%e1%80
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး သီပေါမွို့နယျအတှငျးရှိ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (SNDP) ကြားဖွူပါတီ ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ အဆိုပါ SNDP ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး အသေးစိတျ အခကျြအလကျကို သခြောမသိရှိသေးကွောငျး၊ လကျရှိမှာ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါတှငျ သာတှရှေိ့ထားကွောငျး ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (SNDP) ပါတီ၏ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး စိုငျးဘိုးအောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
“ဒီ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ကနြျောတို့လူ အကွောငျးကွားလာခွငျးမရှိသေးဘူး။ ဘယျလို အရေးယူသှားမယျ ဆိုတာ ကနြျောတို့ မဆုံးဖွတျရသေးဘူး။ အှနျလိုငျးမှာပဲ မွငျသေးတော့ ဘာမှတော့ ပွောလို့မရသေးဘူး” ဟု စိုငျးဘိုးအောငျ က ပွောသညျ။ ပါတီ ဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးခံရသညျ့အပျေါ စိစဈသှားပွီး အရေးယူမညျ့ ကိစ်စ ဆုံးဖွတျသှားမညျ ဟုလညျး စိုငျးဘိုးအောငျ က ပွောသညျ။ သြှမျးပွညျတှငျး တိုငျးရငျးသား စညျးလုံးညီညှတျမှု မရှိကွောငျး ပွသသညျ့ ပွယုဒျ ဖွဈသညျ့အတှကျကွောငျ့ သြှမျးပွညျတှကျ ဆုံးရှုံးမှုဖွဈစကွေောငျး ကြားဖွူပါတီ၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဦးဘိုးအောငျ ကပွောသညျ။ “သြှမျးအခငျြးခငျြး ခွထေိုးနခွေငျး၊ သြှမျးပွညျသားအခငျြးခငျြး ဖကျြဆီးခွငျးဟာ သြှမျးပွညျအတှကျ ဆုံးရှုံးမှု ပဲဖွဈ ပါတယျ” ဟု ဦးဘိုးအောငျ ကပွောသညျ။
သီပေါမွို့နယျ တှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (NLD)၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီ အဖှဲခြုပျ (SNLD)၊ ကွံ့ခိုငျရေး ပါတီ( USDP)၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ (SNDP)၊ တအာငျး အမြိုးသားပါတီ (TNP) ၊ ညီညှတျသော ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (UDP)၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အငျအားစု (NDF) နှငျ့ ပွညျထောငျစု ကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ (UBP) တို့ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဟုသိရသညျ။ https://burmese.sha nnews. org/archives/18558
ကရငျနီလူငယျအငျအားစုမြားက ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ အောငျနိုငျရေးအတှကျ ဝနျးရံ၍ ရှားတောမွို့နယျ ကြေးရှာမြားသို့ သှားရောကျပွီး လူငယျအငျအား ၁၀၀ ကြျောခနျ့ဖွငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံး လကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ ထိုသို့ ဝနျးရံ ရာတှငျ အခွားမွို့နယျမြားမှ ဝငျရောကျ၍ ရှေးကောကျပှဲဝငျမညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး လူငယျမြားလညျး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
“ ဒီရှားတောမွို့နယျမှာ ဝငျပွိုငျမယျ့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီက ကိုယျစားလှယျတှကေ ရှေးကောကျပှဲနီးမှ မဲလိုခငျြလို့နရောရခငျြလို့ ဝငျအရှေးခံတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ မဟုတျဘူး။ သူတို့သမိုငျးကွောငျး အရငျလလေ့ာဖို့ ကြှနျတျောအနနေဲ့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။ သူတို့က အရငျကတညျးက ကြှနျတျောတို့ ကယားပွညျနယျ အရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေး၊ လူငယျအရေး၊ အမြိုးသမီးရေးလုပျခဲ့တဲ့သူတှေ ဖွဈတယျ။ ခုမှ ရှေးကောကျပှဲနီးမှ ပျေါလာတဲ့လူတှေ မဟုတျဘူးဆိုတာ အသိပေးစခေငျြ တယျ။ နောကျတဈခုကသူတို့က ပွညျနယျက လူတှသေိတယျ။ ဒသေခံတှဖွေဈတယျ။ ပွညျနယျကိုခဈြမွတျနိုးတဲ့ သူတှေ ဖွဈတယျ။ တခြို့က နရောမရခငျ ကိုယျစားလှယျမဖွဈခငျ ပါတီထကျ ပွညျနယျအရေးကို ဦးစားပေးမယျလို့ ကွှေးကွျောပွီးမှ ပွညျနယျအရေးကွုံလာတဲ့အခြိနျမှာ ပွညျနယျဘကျ မရပျတညျဘဲ ပါတီဘကျရပျတညျတဲ့သူတှရှေိတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကရငျနီပွညျရဲ့သမိုငျးကို မထီလေးစားပွုတဲ့သူတှရှေိတယျ။ ဒီလိုလူကို နောကျထပျ နရောထပျပေးမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ ပွညျနယျကို ထပျစျောကားလိမျ့မယျ။ သူတို့ပွညျနယျသမိုငျးကို မှေးမှိနျအောငျ လုပျကွလိမျ့မယျ။
ဒီလိုလူတှကေို ထပျမရှေးဖို့ လိုမယျ။ ကိုယျ့ပွညျနယျကိုခဈြပွီး ကိုယျ့ပွညျနယျကို စောငျ့ရှောကျမယျ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ရှေးခယျြကွဖို့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ မတ်ေတာရပျခံခငျြတယျ” ဟု ကရငျနီလူငယျခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသော ကိုဒီးဒီးက ဒေါဝယျရောကြေးရှာနေ ပွညျသူမြားနှငျ့ တှဆေုံ့စဉျ ပွောကွားသညျ။
ကရငျနီလူငယျမြားမှာ လှိုငျကျောမွို့မှ တောငျကုနျးတောငျတနျးထူထပျသော ရှားတောမွို့နယျ ကြေးရှာမြားသို့ တဈရှာဝငျ တဈရှာထှကျ သှားရောကျ၍ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးအတှကျ ဝနျးရံလှညျ့လညျကွပွီး ဒသေခံမြားအား ဟောပွောကွသညျဟု သိရသညျ။ ကရငျနီလူငယျအငျအားစုမြားမှာ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲကာလတှငျ NLD ပါတီနှငျ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးခရီးစဉျမြားတှငျ ဝနျးရံ၍ လုံခွုံရေးတာဝနျ၊ ဌာနတေိုငျးရငျးသားဘာသာစကား စကားပွနျတာဝနျနှငျ့ မဲရုံ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရေးတာဝနျမြားအား ကူညီပေးခဲ့ကွသူမြား ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ရှားတောမွို့နယျသညျ တောငျယာ လုပျငနျး ကိုသာ အဓိကထားလုပျကိုငျကွသညျ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသား ကယားလူမြိုးမြား အမြားဆုံးနထေိုငျပွီး လူဦးရေ ၇၀၀၀ ကြျောရှိကာ ဆန်ဒမဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၅၁၄၇ ဦးရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/193051
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးတှငျ စကျတငျဘာ ၂၁ရကျကရြောကျသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနေ့၌ ပွညျတှငျးစဈဆနျ့ကငျြကွ “ Photo Campaing” ကို ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ရှေးကောကျပှဲနီးလာခြိနျ ဖွဈသညျ့ အတှကျ ရခိုငျပွညျ နှငျ့ ခငျြးပွညျ အတှငျး ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျပှဲမြားရပျတနျ့ပေးရနျ တှနျ့အားပေးခငျြသညျ့အနဖွေငျ့ “ ပွညျတှငျးစဈကိုဆနျ့ကငျြ”သညျ့ ကမျပိနျး ပွုလုပျရခွငျးဖွဈကွောငျး မွနျမာ့ ငွိမျးခမျြးရေး နှငျ့ လုံခွုံရေး သိပ်ပံ ဒါရိုကျတာ ကိုဝငျ့ထညျကောငျးမွတျ က ပွောသညျ။
“ ရှေးကာကျပှဲရှိနတောနဲ့တဈပွိုငျနကျထဲဘဲ ရခိုငျပွညျ နဲ့ ခငျြးပွညျနယျ မှာ စဈပှဲတှဖွေဈနတေယျ။ လူထုတှကေလညျး သိရှိမှုအားနညျးတယျ။ အစိုးရတှကေတော့ သိရှိပမေယျ့ ဒီအပျေါမှာကို ကယျြကယျြလောငျးလောငျးနဲ ပွညျသူထိခိုကျမှုတှေ ကို လုပျဆောငျပေးဖို့ ပကျြကှကျနတေယျ။ အဲပျေါမှာ ကနြျောတို့ တှနျးအားတဈခုပေးခငျြတဲ့ အနနေဲ့ ပွုလုပျတာပါ” ကိုဝငျ့ထညျကောငျးမွတျ က ပွောသညျ။ လကျရှိအခြိနျထိ ရခိုငျပွညျ စဈပှဲ အတှငျး သဆေုံးသူ (၂၉၀) ရှိပွီး၊ မသနျးစှမျးသူ ၆၅၀ နှငျ့ စဈဘေးရှောငျး ပွညျသူ ၂ သိနျးကြျောရှိပွီး ဖွဈကွောငျး ကိုဝငျ့ထညျကောငျးမွတျ ကပွောသညျ။“ကနြျောတို့ လူငယျ အနနေဲ့ ပွညျတှငျးစဈကို အတူဆနျ့ကငျြမယျဆိုရငျ တနကေ့ရြငျ ကနြျောတို့လိုခငျြတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို ရနိုငျမယျ။ ကနြျောတို့ ပွညျသူတှအေားလုံး က ဒီပွညျတှငျးစဈကို ဆနျကငျြမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့လိုခငျြတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို ဖျောဆောငျနိုငျမယျ” ဟု ကမျပိနျးပှဲကို တကျရောကျလာသညျ့ လူငယျ ကိုဇျော ကပွောသညျ။
အဆိုပါ Photo Campaing ကို အရပျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ မိုငျးပနျလူငယျအဖှဲ့အစညျး၊သြှမျးတောငျး အမြိုးသမီးအဖှဲ့၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး အဖှဲ့ နှငျ့ လူငယျ (၆၀) ခနျ့ တို့ပူပေါငျးပါဝငျခဲ့ပွီး၊ “ပွညျတှငျးစဈဆနျ့ကငျြကွ” ဆိုသညျ့ စာသားကို ကိုငျကာ ဓာတျပုံရိုကျခွငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေး အတှကျ စကားပွောကွားခွငျးတို့ ပွုလုပျကွောငျးသိရသညျ။ စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျ သညျ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့မှသတျမှတျထားသညျ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ငွိမျးခမျြးရေးနဖွေ့ဈသညျ။ https://burmese. shannews.org/archives/18573
နှဈပေါငျး (၇၀) နီးပါးဖွဈပှားခဲ့သော မွနျမာ့ပွညျတှငျးစဈကို အဆုံးသတျရနျ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျနေ့ ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေး နတှေ့ငျ ကခငျြအမြိုးသားမြားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့ WMR က ထုတျပွနျတောငျးဆိုခဲ့သညျ။ တိုငျရငျးသားတျောလှနျရေးအဖှဲ့မြား နှငျ့ အစိုးရ၊ တပျမတျောကွား အသိတရားဖွငျ့ နားလညျမှုတညျဆောကျပွီး ငွိမျးခမျြးရေးကို အတူတကှဖျောဆောငျရနျ ထုတျပွနျခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုသညျ။ လကျရှိ Covid-19 ရောဂါ ကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့တကျနခြေိနျတှငျ အပဈအခတျရပျဆိုငျးရေး ကို လကျတှလေု့ပျဆောငျခွငျးမရှိပဲ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ပွငျးထနျသညျ့ထိုးစဈနှငျ့အတူ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျလညျး စဈဆငျရေးမြား ထပျမံပွုလုပျလာသညျကို တှနေ့ရေကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
“ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးဘကျမှာလညျး ထိုးစဈဆငျမှုတှေ ပွနျပွီးမှရှိလာတယျ၊ ပွီးရငျ ရခိုငျပွညျမှာလညျး တိုကျပှဲတှနှေငျ့ ထိုးစဈဆငျမှုတှဆေကျတိုကျရှိနတေယျ ဆိုတော့ တဈဖကျမှာလညျး ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ Covid-19 လညျး မွနျမာပွညျအနှံ့ ကူးစကျမှုနှုနျးအရှိနျမွငျ့လာနတေယျ။ ဒါတှကေိုစဉျးစားပွီး တဈနိုငျငံလုံး အေးခမျြးသာယာဝပွောလာဖို့ရနျနှငျ့ တနျးတူညီမြှ ရေး၊ တို့ကိုရှရှေု့ပွီး စဈပှဲမြား၊ ပဋိပက်ခမြားရပျတနျ့ပွီး ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျ တိုကျတှနျးလိုတာကွောငျ့ ထုတျပွနျရခွငျးဖွဈတယျ”ဟု ကခငျြအမြိုးသားမြားအတိုငျပငျခံအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဆရာဦးအငျခှမျတနျဂှနျး က ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျအတှငျး စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားလုံခွုံစိတျခစြှာနရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ တပျမတျောနှငျ့ ကခငျြ လှတျလပျရေး တပျမတျော KIA တို့ကွား Bilateral အဆငျ့ အပဈရပျသဘောတူလကျမှတျထိုးထားနိုငျမှ ယုံကွညျမှုရရှိ နိုငျမညျဟု ဆိုသညျ။ ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂမှ ၁၉၈၁ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ ၂၁ ရကျနတှေ့ငျ ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေးနအေ့ဖွဈ UNGAS တှငျ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကွသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/09/22/%e1%80%95%e 1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1
မှနျပွညျနယျ ကြိုကျမရောမွို့နယျ ကော့သပျကြေးရှာ၌ စိုကျထူထားသော NLD ပါတီအောငျနိုငျရေးဆိုငျးဘုတျ ဖကျြဆီးသူ လူငယျတဈဦးက ကွအေေးတောငျးပနျခွငျးမပွုသဖွငျ့ ကြိုကျမရောမွို့မရဲစခနျးတှငျ ဖမျးဆီးအရေးယူထားကွောငျး သတငျးရ ရှိသညျ။ မှနျကြေးရှာတှငျ NLD ဆိုငျးဘုတျထောငျခွငျးကို လုံးဝလကျမခံသလို တောငျးပနျခွငျးလညျးမပွုသညျ့ အဆိုပါ အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ ကော့သပျကြေးရှာသားက စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနေ့ မှနျးလှဲ ၃ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ ယငျးကဲ့သို့ ဆိုငျးဘုတျဖကျြဆီးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ကြိုကျမရောမွို့နယျ NLD အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျဇျောဦးက “ကနြျောတို့ဖကျက ပထမစဉျးစားပါတယျ ကောငျလေးဖကျက ကွအေေးဖို့တောငျးပနျရငျ ကနြျောတို့ဖကျက ကွေးအေးဖို့အဆငျသငျ့ပါ သူ့ရဲ့အနအေထားက လုံးဝတောငျးပနျတဲ့အနအေထားမဟုတျဘူး ကနြျောတို့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာဥပဒေ ပုဒျမ ၅၇၊ ၅၈ နဲ့ အမှုဖှငျ့ခဲ့တာပေါ့၊ တကယျလို့ သူ့ဖကျက ကနြျောတို့ကို တောငျးပနျမယျဆိုရငျ ဒီဟာကို ဆကျလုပျဖို့အစီအစဉျမရှိဘူး၊ ဒါပမေယျ့ သူ့ပုံစံက လုံးဝလကျမခံတော့ အဲဒါနဲ့ကနြျောတို့အမှုဖှငျ့တာပါ”ဟု ဆိုသညျ။ ကော့သပျကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးက “ သူ့မိဘတှကေို ကနြျောတို့ချေါတှတေ့ယျ NLD ကိုချေါတယျ ဒါကိုယျ့ရှာသားတှအေားလုံးဖွဈကွတဲ့အတှကျ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ညှိနှိုငျးဖွရှေငျး ပေးမယျ ဆုံးရှုံးမှုတှအေတှကျ လြျောပေးလိုကျပါဆိုတော့ သူပွနျပွောတာက မလြျောနိုငျဘူး မှနျရှာမှာ NLD ဆိုငျးဘုတျ လာပွီးမထောငျနဲ့ဆိုတော့ ကနြျောကလညျး ညီလေးရဒေါမြိုးမပွောသငျ့ဘူး ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့အားလုံး ထောငျလို့ရပါတယျလို့၊ ဒါကိုသူကလုံးဝလကျမခံဘူးဆိုတော့ ရဲလကျကိုပဲ အပျလိုကျတာပေါ့” ဟု ဆိုသညျ။
ရှေးကောကျပှဲ ဥပဒပေါ ပုဒျမ ၅၇၊ ပုဒျမ ၅၈(ခ)၊ ပုဒျမ ၅၈(ဃ)၊ ပုဒျမ ၆၀၊ ပုဒျမ ၆၁(ခ)နှငျ့ ပုဒျမ ၆၁(ဂ)တို့သညျ ရဲ အရေးပိုငျ သညျ့ ပုဒျမမြားဖွဈသညျ့အတှကျ ရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့နိုငျပွီး ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျမီဖွဈစေ၊ ရှေးကောကျပှဲနေ့ တှငျဖွဈစေ၊ ရှေးကောကျပှဲအပွီး ၁၅ ရကျအတှငျးဖွဈစေ အရေးယူပိုငျခှငျ့ရှိကွောငျး၊ ပွဈမှုထငျရှားပါက ၁ နှဈထကျ မပိုသော ထောငျဒဏျ ဖွဈစေ၊ ကပျြ ၁ သိနျးထကျ မပိုသော ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျနှဈရပျလုံး ဖွဈစေ ခမြှတျခံရနိုငျကွောငျး ပွဌာနျးထားသညျ။ https ://www.bnionline.net/mm/news-75614
အထူးဒသေ(၄) မိုငျးလားတှငျ သှားရောကျအလုပျလုပျသညျ့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမား (၆၀)သညျ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျး ၂ နာရီ ခနျ့ တောငျကွီးမွို့သို့ ရောကျရှိလာကွောငျး သိရသညျ။
ထို ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားသညျ မိုငျးလား မှပွနျလာပွီး တောငျကွီးသို့ ခတ်ေတခဏနားကာ သကျဆိုငျရာ မွို့သို့ ပွနျလညျပို့ဆောငျပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး တောငျကွီးမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးခှနျသကျနှောငျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“မိုငျးလာကနတေဈဆငျ့ ပွနျလာမဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျ ကတော့ (၆၀) ကြျောထကျဝငျလာတယျ။ ကတြျောတို့ က ဒီကနတေဈဆငျ့ ကားကို ပွနျစီစဉျပေးပွီး သငျဆိုငျရာမွို့နယျကို ပွနျပို့ပေးတာပါ”ဟု ဒုတိယဦးစီးမှူး ဦးခှနျသကျနှောငျး က ပွောသညျ။ အဆိုပါဝငျလာသူမြားကို သကျဆိုငျရာမွို့သို့ ပွနျပို့ ရာတှငျ ကားခမြားကို တဈခြို့ကိုသာ အစိုးရဘကျမှ ထောကျပံ့ပေးကွောငျး သိရသညျ။“ဒီကိုရောကျလာတဲ့ သူတှကေတော့ တဈခြို့က ကားခကို တကျနိုငျကွတယျ။ လုံးဝ ငှကွေေး အခကျခဲရှိတဲ့သူ တှကေိုတော့ ကတြျောတို့ဖကျနေ ပွီးထောကျပံ့ ပေးတယျ” ဟု ဦးခှနျသကျနှောငျးက ပွောသညျ။ သြှမျးပွညျနယျတောငျးပိုငျး တောငျကွီးမွို့ထဲ သို့ ရှပွေောငျး အလုပျသမား မြားကို မိမိနထေိုငျရာသို့ ပွနျပို့ဆောငျပေးရာတှငျ ဧပွီလ မှ စတငျလကျခံပွီး အခုခြိနိထိ (၅၀၀၀) ကြျောရှိပွီးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ တောငျကွီးမွို့ထဲသို့ မွဝတီမှ တရားဝငျ ဖွငျ့ ဝငျရောကျလာသူမြားကို Quarantine ထားရာတှငျ အစိုးရဖကျမှ စားစရိတျမြားကို ထောကျပံ့ပေ့းပွီး ကိုယျ့မွို့နယျ ကိုယျအစီနဲလာသူမြားကို တဈရကျကို (၄၀၀၀) နှုနျးဖွငျ့ Quarantine ဝငျရသညျ ဟု ဦးခှနျသကျနှောငျး က ပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18566
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မှနျနှငျ့ ကရငျပွညျနယျအပွငျ ရနျကုနျ၊ ဧရာဝတီနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောမြားတှငျ မှနျအမြိုးသမီးကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ပါဝငျယှဉျပွိုငျသှားမညျဖွဈပွီး ယခူအခါ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးမြား စတငျဆောငျရှကျ နပွေီဟု ဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြအရ သိရသညျ။
“ကမြတို့ကားတနျးနဲ့ လှညျ့လိုကျတယျ တဈခေါကျပွီးသှားပွီ အဆငျတော့ပွပေါတယျ ကမြတို့အတှကျ မဲသခြောပေါကျရ မယျလို့တော့ မပွောနိုငျဘူး ဒါပမေယျ့ မှနျအမြိုးသမီးတှကေတြော့လညျး လူတှကေအမြားကွီး လကျခံတဲ့အနအေထား ခဈြခငျတဲ့အနအေထားတှတေော့ မွငျနရေ တာပေါ့နျော ကမြတို့အတှကျလမျးပှငျ့နပွေီလို့ပွောလို့ ရပါတယျ၊ ကမြတို့ပါတီ တော့ လူတှအေားလုံးက သိသှားတာပေါ့နျော ပါတီကွျောငွာတာလောကျကတော့ ရမယျ ဒါပမေယျ့ ပွောလို့မရဘူးလေ အခွအေနကေလညျး ရနိုငျတဲ့အနအေထားလညျး ရခငျြရသှားမှာပေါ့ ပွညျသူကတြော့လညျး ကမြတို့ကိုလိုလားနတေဲ့အပိုငျး တှေ ရှိပါတယျ” ဟု မိသနျးရှငျက ဆိုသညျ။
မိအေးဇာဝငျးက “ကမြတို့တောငျဥက်ကလာပေါ့နျော ဆိုငျးဘုတျတငျအခမျးအနားလုပျပွီးတော့ ဆိုငျးဘုတျတငျတယျ ကမြတို့ ရပျကှကျက မှနျနညျးနညျးပါးပါး ချေါပွီးတော့ ကမြတို့ကိုယျ မိတျဆကျတယျ အဲလောကျပဲ ကမြတို့လုပျထားပါသေးတယျ မှနျပွညျနယျနဲ့တော့ မတူးဘူးပေါ့ရှငျ ဒီမှာမဲဆှယျစညျးရုံးရေးလုပျရတဲ့အခါကတြော့ မှနျပွညျနယျကတြော့ အငျတိုကျအား တိုကျရှိတာပေါ့နျော ကမြတို့ကတြော့ တိုငျးရငျးသားပေါငျးစုံကို ကမြတို့က စုပွီးနထေိုငျတဲ့ဒသေဖွဈလို့မို့လို့ ကမြတို့က တိုငျးရငျးသားအားလုံးအတှကျကိုပဲ အခုဟာက ဖကျဒရယျကိုသှားမှာဆိုလို့ရှိရငျ ဖကျဒရယျကိုပဲ ကမြတို့က မဲဆှယျစညျးရုံး ရေး ဆငျးရမှာပါရှငျ့”ဟု ပွောသညျ။
“အခုလကျရှိလောလောဆယျ ပွညျသူတှရေဲ့တုံ့ပွနျမှုက အခွအေနကေောငျးတယျလို့ ပွောရမှာပေါ့နျော ဒီသှားခဲ့တဲ့ နရော ဆိုလို့ရှိရငျ ကော့ဘိနျးရယျ ကော့ပေါကျရယျ ပွီးလို့ရှိရငျ မငျးရှာရယျ အဲဒါကတြော့ ပါတီဆိုငျးဘုတျကွီး ကိုယျ့ရဲ့ပိုစတာတှေ ပေါ့နျော တငျဖွဈခဲ့တယျ အဲမှာဆိုလို့ရှိရငျ လူငယျတှေ ဆိုလို့ရှိရငျ ပိုပွီးအားရတာပေါ့နျော ကမြဝငျပွိုငျလိုကျတဲ့အတှကျပေါ့ နျော တခြို့ရှာတှမှောဆိုလို့ရှိရငျ မိနျးခလေးတှေ နိုငျငံရေးဘကျကို ပိုပွီးတော့စိတျဝငျစားလာတယျ အဲဒီအတှကျ ကမြဝမျး သာတာပေါ့နျော နောကျတဈခု ကိုယျက မိနျးခလေးဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျက နိုငျငံရေးအတှအေ့ကွုံလညျး အခွားသူတှနေဲ့ စာလို့ရှိရငျ ကိုယျကနညျးနညျး အားနညျးတာပေါ့နျော အခြို့ဆိုလို့ရှိရငျ ပွောကွတယျ နုသေးတာပေါ့ အဲလိုပွောကွတဲ့ လူလညျး ရှိတာပေါ့နျော”ဟု မိအေးယဉျဝငျးက ဆိုသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75613
သြှမျးပွညျအတှငျး အရပျသားမြား မကွာခဏ သတျဖွတျခံရသျောလညျး ကြူးလှနျသညျ့ တရားခံမြား တကွိမျတခါမှ မပျေါ ပေါကျ မဖမျးမိဘဲ အမှုမြားမှာ အလိုအလြောကျပွီးဆုံးခဲ့ရသညျ။ မြားသောအားဖွငျ့ သတျခံရသညျ့ အရပျသားမြားသညျ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့ နှငျ့ ဆကျစပျသူမြားဟု အစိုးရ တပျမတျောဘကျမှ အစဉျအမွဲ ပွောဆိုထားသညျကို တှမွေ့ငျရသညျ။ သို့သျော သတျဖွတျခံရသညျ့ အရပျသားမြားသညျ တောတောငျ လယျယာထဲတှငျ အလုပျလုပျနကွေသညျ့ တောငျပျေါတိုငျးရငျးသားမြားဖွဈပွီး မိခငျဘာသာစကားမှလှဲပွီး တခွားဘာသာစကားအားနဲကွကာ စဈကွောငျးနှငျ့ တှခြေိ့နျ၊ လကျနကျကိုငျမြားနှငျ့တှခြေိ့နျ ထိတျလှနျ့ ကွောကျရှံပွီး ထှကျပွေးကွသလို တခြို့မှာလညျး စဈဆေးမေးမွနျးသညျကို ပွနျမဖွတေတျ၊ မဖွနေိုငျကွသဖွငျ့ ရိုကျနှကျဖမျးခြုပျသတျဖွတျခွငျးခံကွရသညျ။
လကျရှိ ယခု လပိုငျးအတှငျး ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျ နှငျ့ မူဆယျမွို့နယျ အတှငျး တအာငျး (ပလောငျ) ရှာသားမြား သတျဖွတျခံရသညျ့ အပျေါ အမှုမှနျပျေါပေါကျရနျ လိုအပျကွောငျး တအာငျး ပွညျသူမြားက တောငျး ဆိုကွသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ သွဂုတျ ၂၁ ရကျကလညျး သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျ နမျ့ကတျကြေးရှာအုပျစုတှငျ ဒသေခံ(၂)ဦးနှငျ့ နမျ့ခမျးမွို့နယျ လှယျမှနျးကြေးရှာ ဒသေခံ (၁) ဦး၏ ရုပျအလောငျးကို တူးဖျောတှရှေိ့ခဲ့သညျ။ ထိုသူ (၃)ဦးသညျ လှနျခဲ့သညျ မလေကုနျက စတငျပြောကျဆုံးခဲ့သူဖွဈပွီး၊ ၃လ အကွာမှ အလောငျးကို ပွနျလညျတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး မူဆယျမွို့ တအာငျးစာပေ ယဉျကြေးမှု ကျောမတီ ဥက်ကဌ ဦးညီအောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။
ထိုနယျမွေ အတှငျးသို့ လှနျခဲ့သညျ့ ၃ လခနျ့က အစိုးရ တပျမတျော တပျမ(၉၉ ) လာရောကျ လှုပျရှားခဲ့ကွောငျး ဒသေခံ သံဃာမြားနှငျ့ ပွညျသူမြားက ပွောဆိုကွသညျ။“ အခု မူဆယျ အလောငျး (၃)လောငျးကိစ်စက ခကျတော့ခကျတယျ။ တပျမ(၉၉) ကလညျး အဲ့နယျမွမှော လှုပျရှားမှုမရှိဘူးပွောတယျ။ သူတို့ ကငွငျးဆိုထားတယျ”ဟု ဦးညီအောငျ ကပွော သညျ။ ထိုသို့သတျခံရပွီး မွမွေုပျထားသညျ့ အလောငျး (၃)လောငျးသညျ တောထဲတှငျ မီးသှေးဖုတျသညျ့ ရှာသားမြား၊ တောထဲတှငျ ရှာဖှစေားသောကျနသေညျ့ အရပျသားပွညျသူမြားဖွဈကွောငျး ဦးညီအောငျ က ပွောပွသညျ။
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး အတှငျး အစိုးရတပျမတျော မှ ကြူးလှနျသညျ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှု အမှုပေါငျး (၁၄၅) ခုရှိပွီး စုစုပေါငျး ပွဈမှု ကြူးလှနျခံရသညျ့ ဒသေခံ ၄၁၇ ဦးရှိကွောငျး တအာငျး အမြိုးသမီးအဖှဲ့အစညျး (TWO) ထုတျပွနျခကျြ အရ သိရသညျ။ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုမြားမှာ တပျသားမြားမှ ပွညျသူမြားကို ရိုကျနှကျခွငျး၊ စဈသားစုဆောငျးခွငျး၊ စဈဘှတျ ဖိနပျစီးပွီး ကနျခွငျး၊ တုတျ-ဝါးလုံးဖွငျ့ ရိုကျနှကျခွငျး၊ လကျသီးဖွငျ့ ထိုးနှကျခွငျး၊ သနေတျဖွငျ့ ရိုကျနှကျခွငျး တို့ဖွဈကွောငျး TWO ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။“အရာရာကို စိုးရိမျနရေတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈမှာကို စိုးရိမျရသလိုတိုကျပှဲ မဖွဈ ရငျလညျး စဈကွောငျးတကျလာရငျ ပျေါတာဆှဲတာ။ စဈဆေးတာခံရတယျ။ မဖွနေိုငျရငျ ရိုကျတယျ။ ကွောကျနရေတယျ”ဟု သြှမျးမွောကျ ကှတျခိုငျနယျမွတှေငျ နထေိုငျသညျ့ အမြိုးသမီး တဦးကပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org /archives/18545
ကရငျပွညျနယျ၊ ဖားအံမွို့နယျအတှငျးရှိ၊ ကအေဲနျယူ၊ သထုံခရိုငျ ထိနျးခြုပျနယျမွေ ခလယျဟယျရှာ (ညောငျတုနျးရှာ) လမျး၌ ကိုဗဈ ကာကှယျရေးဂိတျ ဖှငျ့လှဈမှုအပျေါ ဒသေတှငျး စခနျးလာထိုငျထားသညျ့ အစိုးရစဈတပျက စကျတငျ ဘာ ၁၈ နှငျ့ ၁၉ ရကျမြားတှငျ လာရောကျဟနျ့တားမှု ပွုလုပျခဲ့သညျဟု သထုံခရိုငျ အတှငျးရေးမှူး ပဒိုစောစိုးမွငျ့က ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ ကိုဗဈကာကှယျရေးဂိတျကို ခှငျ့ပွုခကျြမရှိဘဲဖှငျ့လို့မရဘူးဆိုပွီး လာကနျ့ကှကျတယျ။ ဂိတျကို ဖွုတျခိုငျး တယျ။ ကနြျောတို့ကလညျး ပွနျရှငျးပွတော့ စကားအခအြေတငျမြားတယျ”ဟု ပဒိုစောစိုးမွငျ့က စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျနတှေ့ငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး၊ သထုံခရိုငျနှငျ့ အနီးတဝိုကျတှငျ ကိုဗဈ အတညျပွုလူနာတှရှေိ့လာမှု နှငျ့အတူ ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျလာမညျကို ဒသေခံမြားစိုးရိမျကာ ကာကှယျတားဆီးရေးဂိတျထားရှိရနျ တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ သထုံခရိုငျတာဝနျရှိသူမြားက ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျကို စကျတငျ ဘာ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ ပွနျလညျဖှငျ့လှဈခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့ ကနျြးမာရေးလုပျသားမြားက ကိုဗဈကာကှယျရေးဂိတျ ဖှငျ့လှဈထားမှုအပျေါ အစိုးရ စဈတပျ စဈဆငျရေးကှပျကဲမှု ဌာနခြုပျ-စကခ ၄၊ ခွမွေနျတပျရငျး -ခမရ ၄၀၉ လကျအောကျခံ ညောငျရှာစခနျးရှိ အရာရှိ တဦီးပါအဖှဲ့က စကျတငျဘာ ၁၈ ရကျ၊ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီခနျ့တှငျ လာရောကျဟနျ့တားပွီး ဂိတျကို ဓါတျပုံရိုကျယူရနျ ပွုလုပျခဲ့သညျ။
အဆိုပါ ကအေဲနျယူ၊ သထုံခရိုငျ၊ ဖားအံမွို့နယျ၊ ခလယျဟယျရှာတှငျ ကိုဗဈ စတငျဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ ဧပွီလ အတှငျး ကနျြးမာရေး စဈဆေးသညျ့ဂိတျ ထားရှိခဲ့ဖူးပွီး ကိုဗဈ ဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့မှုနညျးသှားခြိနျတှငျ ဂိတျကို ပွနျလညျ ပိတျသိမျးခဲ့ကာ ဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့မှုမြား ပွားလာသညျ့ ယခုအခြိနျတှငျ တဖနျပွနျဖှငျ့လှဈခွငျးဖွဈသညျဟု ခရိုငျတာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလတုနျးကလညျး ကအေဲနျယူ သထုံခရိုငျ မျောစကိုဒသေ ထောငျမှူး ကြေးရှာအုပျစု ဈေးမသှယျရှာတှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ Covid -19 ရောဂါကာကှယျရေး ကနျြးမာရေး စဈဆေး ရေးဂိတျတဈခုအား တပျမတေျော၏ ဖိအားပေးမှုကွောငျ့ ဖကျြသိမျးခဲ့ရဖူးသညျဟု ကအေဲနျယူဘကျက ပွောသညျ။ http://kicnews.org/202 0/09/%e1% 80%b1%e1%80%80%e1%80%a1%e1%80%b2%e1%80%94%e1%
ကယားပွညျနယျ၊ မယျစဲ့မွို့နယျတှငျ ကယနျးအမြိုးသား ပါတီ (KNP) နှငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ရကျတိုကျသှားသောကွောငျ့ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီက မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံးကို တငျပွခဲ့ပွီး ကျောမရှငျက မဲဆှယျပှဲရကျမြား ပွောငျးလဲပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
စကျတငျဘာလ ၁၂ ရကျနကေ့ ကယားပွညျနယျ မယျစဲ့မွို့နယျ၊ မယျစဲ့ကြေးရှာအုပျစု၊ ဟိုစဲ့ကြေးရှာတှငျ ကယနျးအမြိုးသား ပါတီဝငျမြားနှငျ့ NLD ပါတီမှ ကယားပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဦးအယျလျဖောငျးရှိုတို့ မဲဆှယျ စညျးရုံးရေး ဆငျးသညျ့ရကျ တိုကျဆိုငျသှားသောကွောငျ့ NLD က ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျသို့ တငျပွခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး KNP ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခှနျးဘီထူး (ခ) လှီးစီငွိမျးက ပွောသညျ။ မယျစဲ့မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံးမှ အမညျမဖျောလိုသညျ့ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ဦးအယျလျဖောငျးရှို ကိုယျတိုငျ ဖုနျးဖွငျ့ ကျောမရှငျရုံးသို့ တငျပွခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး မဇ်ဈိမကို အတညျပွုသညျ။ ထို့ကွောငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြား မဲဆှယျစညျးရုံးရေးဆငျးမညျ့ နရေ့ကျမြားကို မတိုကျအောငျ ပါတီ ရှဈခုမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားနှငျ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျး နှဈဦးတို့ကို ချေါပွီး ရကျပွနျလညျ သတျမှတျပေး ခဲ့ပွီး ဖွဈကွောငျးလညျး မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံးက ပွောသညျ။
KNP ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခှနျးဘီထူးက “ဥပမာ ကြောကျစု ဆိုတဲ့ရှာကို ကြှနျတျောတို့ သှားခဲ့ပွီးပွီ။ ဒါပမေယျ့ အခု အခြိနျဇယား ပွနျဆှဲတော့ မနကျဖွနျဆို ကြောကျစုရှာကို ကြှနျတျော ပွနျသှားရတော့မလိုလို ဖွဈသှားတယျ။ ဘယျလိုချေါမလဲ၊ ရကျတှေ အပွောငျးအလဲ ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ကမောကျကမ ဖွဈသှားကုနျတယျ” ဟု ပွောသညျ။ မယျစဲ့မွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂) ၌ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး KNP ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ခှနျးဘီထူးက ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး အဖွဈ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ KNP ပါတီကို အသကျအငယျဆုံး ၂၈ နှဈအရှယျမှ အသကျ ၄၀ အရှယျအတှငျး လူလတျ ပိုငျးမြားက ဦးဆောငျ၍ ကယားပွညျနယျရှိ ဒီးမော့ဆိုနှငျ့ မယျစဲ့မွို့နယျ၊ ရှမျးပွညျနယျရှိ ဖယျခုံမွို့နယျ ၊ ကရငျပွညျနယျရှိ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ နပွေညျတျောရှိ ပဉျြးမနားမွို့နယျတို့တှငျ ဝငျရောကျ ယဉျပွိုငျသှားမညျ ဖွဈသညျ။ http://www.mi zzimaburmese.com/article/73623
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ၊ မယေုတောငျထဲ ညောငျခြောငျးကြျောလမျးတှငျ မွနျမာတပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့ တပျတျော (AA) တို့အကွား ၂ ရကျဆကျတိုကျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့သညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ တိုကျပှဲဖွဈပှားရာ ကံ့ကျောမွိုငျ နတလစံပွကြေးရှာသား တဈဦးက “ပထမဖွဈတာက စကျတငျဘာ ၁၆ ရကျ နလေ့ယျမှာ ဒိုးတနျးခြောငျးထဲမှာ ဖွဈပါတယျ။ မနကေ့ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ ညောငျခြောငျး တောငျကြျောလမျးမှာ ဖွဈပါတယျ။ တိုကျပှဲဖွဈနတော နှဈရကျဆကျ တိုကျရှိနပေါပွီ။ ဒီနတေ့ော့ အသံမကွားရသေးပါဘူး”ဟု ပွောကွားသညျ။ ယခုတိုကျပှဲဖွဈပှားနသေညျ့ နရောသညျ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ညောငျခြောငျးမှ မောငျတောမွို့နယျ ဥဒေါငျးကြေးရှာကို မယေုတောငျကို ဖွတျပွီး ဖောကျလုပျနေ သညျ့ ကားလမျး အနီးဝနျးကငျြတှငျ ဖွဈပှားနသေညျဟု သိရသညျ။
“ ပထမနေ့ ဖွဈတာက ၁၂ နာရီကြျော ၁ နာရီလောကျ စဖွဈတယျ။ မိနဈ ၂ဝ ကွာခဲ့ပါတယျ။ ဒိုးတနျးခြောငျးထဲ ဒညငျးတော ရှိတယျ။ အဲဒီမှာ လငျးလုပျခေါငျးတောငျဆိုတာ ရှိတယျ။ အဲဒီမှာ ဖွဈကွတယျ။ မနကေ့တော့ ဦးရှမေောငျ နှားရုံနောကျမှာ နှားစားကကျြကှငျးရှိတယျ။ အဲဒီနောကျက တောငျခြိုငျမှာ ဖွဈကွတယျ။ မှနျးလှဲ ၂ နာရီကြျော ၃ နာရီလောကျစပွီး ည ၆ နာရီ ကြျောထိ ဖွဈကွတယျ။ ရှာကတော့ အပွနျအလှနျပဈသံတှေ ဒီအတိုငျးကွားနရေတယျ။ ရှာမှာက အမြိုးသမီးတှေ၊ ကလေး တှတေော့ တဈခွားနရောကို ရှောငျနကွေတယျ။ ရှာကို လကျနကျကွီးကညျြတှကေတြာလညျး မရှိပါဘူး”ဟု ပွောကွား သညျ။“ပထမနကေ့ မိနဈ ၂ဝ၊ နာရီဝကျလောကျဖွဈတယျ။ မနကေ့တော့ ညနေ ၃ နာရီက နဝေငျ ၆ နာရီကြျောထိ ဖွဈတယျ။ ဒီနတေ့ော့ အသံတိတျနတေယျ။ သနေတျသံတှကေို ပေါကျပေါကျ ဖောကျသလိုကွားရတယျ။ ဖွဈတဲ့ နရောက ရှာနဲ့ နညျးနညျးဝေးပွီး တောငျထဲမှာ ဖွဈနကွေတာဆိုတော့ ရှာဘကျကို လကျနကျကွီး ကညျြတှေ လာကတြာတော့ မရှိပါဘူး။ ရှာသားတှကေတော့ ဘယျမှ ထှကျမပွေးပါဘူး။ ကိုယျ့အိမျထဲမှာ ကိုယျနကွေတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။
ညောငျခြောငျးတှငျ နယျခွားစောငျ့တပျရှိနပွေီး အနီးဝနျးကငျြတှငျ အခွအေနမှော တိတျဆိတျ ငွိမျသကျနကွေောငျး၊ တောငျထဲတှငျ ဖွဈပှားခွငျးဖွဈ၍ ညောငျခြောငျးကြေးရှာအနီးတှငျ အေးအေးဆေးဆေးရှိနကွေောငျး ၎င်းငျး အရပျလူကွီးက ပွောကွားသညျ။ https://www.bni onlin e.net/mm/news-75610
ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျးတှငျ စဈရေးပဋိပက်ခမြားကွား လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရမှု မြားစှာ ရှိနကွေောငျး စုံစမျးရှိရသညျ။ ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ လမှ သွဂုတျလအထိ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ ကွောငျ့ မွမွေုပျမိုငျးနငျ့မိ သဆေုံးသူ (၂၃)ဦး နှငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိသူ (၂၀)ဦး၊ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခံရပွီး သဆေုံးသူ (၂၅)ဦး နှငျ့ ဒဏျရာရရှိသူ (၆)ဦး တို့ ရှိကွောငျး သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု ဆိုငျရာ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးအဖှဲ့ HST-NSS က ယနေ့ စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျစှဲဖွငျ့ ကွညောခကျြတစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။
ထိုထုတျပွနျခကျြတှငျ ပွညျတှငျး နရေပျစှနျ့ခှာသူ ၁၂၈၀ ကြျော၊ ကလေးစဈသား စုဆောငျးခံရမှု ၂ ဦး၊ ရိုကျနှကျနှိပျစကျခံရသူ ၇ ဦး နှငျ့ ဖမျးဆီးခံရသူ ၁၀ ဦးထိကွောငျး ရေးသားထားသညျ။ အဆိုပါ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရသူ မြားသညျ သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျ၊ ကှတျခိုငျမွို့နယျ ၊ သီပေါမွို့နယျ၊ ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ နမ်မတူမွို့နယျ၊ မနျတုံ၊ နမျ့ခမျး နှငျ့ မူဆယျမွို့နယျ တို့ဖွဈကွောငျး (HST-NSS) မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဟောငျးဒေါငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ ကိုဗဈ ကာလအတှငျးမှာ ဖွဈတဲ့ ကိစ်စပါ။ တျောတျောမြားတယျ။တယောကျတယောကျ ဆိုရငျလူတှကေ သိပျပွီး အာရုံမထား ကွဘူး။ တကယျတော့ အားလုံး ပွနျပေါငျးကွညျ့လိုကျရငျ တလကို ၁၃ ယောကျလောကျ ရှိတယျ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျ ခံနရေတာ ” ဟု ဦးဟောငျးဒေါငျ က ပွောသညျ။
“ အခု အခြိနျက ဒုက်ခသညျစခနျးမှာနတေဲ့သူက အရမျးခကျခဲတယျ။ ဒုက်ခသညျ စခနျးမှာ စားဝတျနရေေးကလညျး ဖူလုံမှု မရှိဘူး။ လှတျလပျသှားလာတဲ့ခြိနျတောငျ ထောကျပံ့မှုအရမျးနညျးတယျ လုံလောကျမှု မရှိဘူး။ အစိုးရကိုယျတိုငျက ထောကျပံ့မှု မရှိဘူး။ ကိုဗဈကာလမှာပိုပွီး ဆိုးရှာတယျလို့ ပွောလို့ရတယျ” ဟု HST-NSS မှ ပွောခှငျ့ရ လှေးလှားရိုနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ကူးစကျမှုနှုနျး တရကျထကျ တရကျမွငျ့တကျလာခြိနျ တှငျ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုကလညျး မွငျ့တကျလာကွောငျး၊ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျတားဆီး ခြိနျတှငျ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုမြား မဖွဈစခေငျြကွောငျးလညျး ဦးဟောငျးဒေါငျ က ထောကျပွပွောသညျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ရှိ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ အစိုးရ တပျမတျောတို့ တိုကျပှဲ မဖွဈပှားရနျ အတှကျနှငျ့ အရပျသားပွညျသူမြားကို လူ့အခှငျ့အရေးမခြိုးဖောကျရနျ သြှမျးမွောကျလူ့အခှငျ့အရေး တကျကွှ လှုပျရှားသူမြား က တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/18571
နပွေညျတျော ပွညျထောငျစု နယျမွေ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ ဥက်ကဌ၏ နအေိမျတှငျ စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျနကေ့ လကျပဈဗုံးတလုံး တှေ့ ရှိရပွီးနောကျ ယငျးအိမျတှငျရှိသညျ့ CCTV မှတျတမျးမြားကို ထပျမံစဈဆေးရာမှတဆငျ့ နောကျထပျ လကျပဈဗုံးတလုံး ထပျမံ တှေ့ ရှိရကွောငျး သိရသညျ။ နပွေညျတျော ဒက်ခိဏသီရိမွို့နယျ ထနျးတပငျကှကျသဈတှငျ နထေိုငျသညျ့ ပွညျထောငျစုနယျမွေ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ ခှဲ ဥက်ကဌ ဦးသိနျးထှေးမှာ ထိုနကေ့ အိမျတှငျ ရှိနစေဉျ ပစ်စညျးတခုဖွငျ့ ပဈလိုကျသညျ့ အသံကွောငျ့ ခွံဝနျးအတှငျး စဈဆေးကွညျ့ရာ ကားဘေးတှငျ လကျပဈဗုံးတလုံးကို စတငျတှေ့ ရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ လုံခွုံရေး တာဝနျရှိသူမြားက ဦးသိနျးထှေး၏ နအေိမျတှငျ တပျဆငျထားသော CCTV ကို စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ထပျမံ စိစဈရာ ပထမဗုံးသီး ပွုတျကသြညျ့ အသံကွားသညျ့ စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျနေ့ ည ၉ နာရီ ၄၈ မိနဈ ခနျ့တှငျ ခွုံထဲ၌ လှုပျရှားမှုတခြို့ ရှိခဲ့ကွောငျး သတိပွုမိခဲ့သညျဟု တပျမတျောမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျး ထှနျးက ပွောသညျ။ ယငျးဗုံးနောကျတလုံး ထပျတှေ့ ရသညျ့ အခြိနျမှာ မနကေ နလေ့ယျ ၂ နာရီ မိနဈ၂၀ တှငျ ဖွဈပွီး ယငျးလကျပဈဗုံးမှာလညျး ပထမ အ ကွိမျ တှေ့ ခဲ့သညျ့ လကျပဈဗုံးအတိုငျးပငျ ဖွဈကွောငျး၊ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတခုက ထုတျလုပျသညျ့ ဗုံးပုံစံ ဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံ တှငျ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ တခြို့ ထံတှငျလညျး ရှိကွောငျး တပျမတျောဘကျက ပွောသညျ။
ကာယကံရှငျ ဖွဈသူ နပွေညျတျော ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ ခှဲ ဥက်ကဌ ဦးသိနျးထှေးထံ ဆကျသှယျခဲ့ရာ သတငျး မီဒီ ယာမြားကို လကျရှိ အခြိနျတှငျ မပွောခငျြသေးကွောငျး ဆိုသညျ။ ကျောမရှငျ အတှငျးရေးမှူး ဦးအောငျစိုးဝငျးကမူ ဗုံးတလုံး ထပျတှေ့ ရှိမှု မှနျကနျကွောငျး၊ ဦးသိနျးထှေးမှာလညျး အိမျတှငျ ဆကျလကျ နထေိုငျပွီး ရုံးလညျး ပုံမှနျတကျရောကျ နကွေောငျး ပွောသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/09/21/230230.html
မျောလမွိုငျ အမှတျ(၁)ဈေးကွီးတှငျ ပိတျထားရသော ဆိုငျရှငျမြားတောငျးဆိုလာသဖွငျ့ စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့ စတငျပွီး မနကျပိုငျးတှငျ ဈေးရုံ B နှငျ့ C ကိုခှငျ့ပွုပွီး နလေ့ညျပိုငျးတှငျ ဈေးရုံ A နှငျ့ D ကို ယာယီထုတျယူခှငျ့ပွုထားကွောငျး ဈေးတာဝနျခံရုံးမှသိရသညျ။
ဈေးတာဝနျခံ ဦးစိုးလှငျက“သူတို့ပစ်စညျးတှကေိုယူသှားပွီးတော့ အိမျကနတေဈဆငျ့ ဖောကျသညျတှကေို ပွနျပွီးပေးလို့ရ အောငျ စီစဉျပေးလိုကျတာပေါ့။ သူတို့ဆိုငျမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့မိသားစုအဆငျပွအေောငျ နှဈဖကျကွညျ့ပွီးစဉျးစားပွီး ယာယီ ခှငျ့ပွုထားပေးတာ”ဟု ပွောသညျ။ မျောလမွိုငျအမှတျ(၁)ဈေးကွီးမှာ မှနျပွညျနယျရှိ မွို့နယျ၊ကြေးရှာအခြို့တို့မှ ကုနျပစ်စညျး မြားကို လကျလီ၊လကျကား ဖောကျသညျယူရောငျးခမြှုမြားရှိသညျ့အတှကျ ပိတျထားရသညျ့ဆိုငျမြား အခကျခဲဖွဈပျေါနပွေီး ယခုလိုခှငျ့ပွုပေးသညျ့အတှကျ အနညျးငယျအဆငျပွမှေုရှိကွောငျး ဆိုငျရှငျအခြို့က ဆိုသညျ။
ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့တကျလာသညျ့အတှကျ အခွခေံစားသောကျကုနျနှငျ့ ဆေးဆိုငျမြားကိုသာဖှငျ့ခှငျ့ပွုထားပွီး ပိတျထားသညျ့ဆိုငျခနျမြားက စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့စတငျပွီး တဈပတျတဈရကျနှုနျးဖွငျ့ ပစ်စညျးမြားထုတျခှငျ့ပွုရနျ တောငျးဆိုထားကွောငျး သိရသညျ။ ဈေးတာဝနျခံရှိတယျ ဈေးတာဝနျခံကနပွေီးတော့ မွို့နယျစညျပငျကိုတငျပွတယျ အခကျ အခဲလေးတှဒေီလိုရှိတယျဆိုတာ ရကျနညျးနညျးကွာနပွေီး ဒီပိတျထားတာလဲ။ ပစ်စညျးတှပေကျြစီးမှာစိုးလို့ ထုတျခှငျ့ပွုဖို့ ဆိုငျတှစေဈဆေးခှငျ့ပွုဖို့ တောငျးဆိုရငျတော့လဲ လုပျပေးပါတယျ” ဟု မျောလမွိုငျ အမှတျ(၁) ဈေးကျောမတီ ဒုတိယဥက်ကဌ ဦးမောငျစိုးမှ ဆိုသညျ။
မျောလမွိုငျမွို့ပျေါ Stay at home ရပျကှကျသတျမှတျနရောရှိ ဈေးမြားတှငျ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့စတငျပွီး အခွခေံစားသောကျကုနျမြားသာ ရောငျးခသြညျ့ဆိုငျမြားကိုသာ ရောငျးခခြှငျ့ပွုကွောငျး မှနျပွညျနယျ စညျပငျသာယာရေး အဖှဲ့မှ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ http://burmese. monn ews.org/2020/09/19/%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%ac %e1%80%ba%e1%8
ကယားပွညျနယျလှတျတျောနဲ့ နိုငျငံရေးအဆုံးအဖွတျပေးတဲ့နရောမှာ အမြိုးသမီးတှေ ပါဝငျဖို့ လိုအပျနတေဲ့အတှကျ အမြိုးသမီး ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေိုမဲပေးဖို့ ကရငျနီ အမြိုးသမီးအစညျးအရုံးက တိုကျတှနျးလှုံ့ဆျောနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲမှာ အနိုငျရရှိတဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှထေဲမှာ အမြိုးသမီးမပါဝငျတဲ့ အပွငျ နိုငျငံရေး အဆုံး အဖွတျ ပေးတဲ့နရောမှာ အမြိုးသမီးတှေ ပါဝငျမှု အားနညျးနတေဲ့အတှကျကို အခုလို တိုကျတှနျးရတာလို့ ကရငျနီအမြိုးသမီး အစညျးအရုံး အတှငျးရေးမှူး ၂ မျောဖရေးမွာက ပွောပါတယျ။
“ကမြတို့ ကရငျနီပွညျနယျမှာ ဒီလှတျတျောထဲမှာပဲ ပွောပွော၊ နောကျပွီး နိုငျငံရေး ဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့နရောမှာပဲ ပွောပွော အမြိုးသမီးပါဝငျမှုက ကိုယျမှနျးထားသလောကျ မရောကျနသေေးတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ ဒီလာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ကမြတို့ အမြိုးသမီးတှကေ ပါဝငျဖို့ အရေးကွီးတယျဆိုတဲ့ဟာမြိုးတှနေဲ့ ကမြတို့က vote for women လုပျရခွငျးဖွဈပါတယျ။
”ဒီအစီအစဉျကို ဩဂုတျလကတညျးကစတငျလုပျဆောငျတာဖွဈပွီး လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ အမြိုးသမီးတှကေို စှမျးရညျမွှငျ့တငျပေးတာအပွငျ ပွညျနယျအတှငျးက လူထုတှနေဲ့တှဆေုံ့ပွီး မိမိကို ကိုယျစားပွုနိုငျမယျ့ အမြိုးသမီးတှကေို မဲပေးဖို့ စညျးရုံးဟောပွောတာ တှလေုပျဆောငျနကွေောငျး ပွောပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲမှာ အမြိုးသမီးတှအေနိုငျရရှိမယျဆိုရငျတော့ ပွညျနယျအတှကျ အမြိုးသမီးတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ ဥပဒနေဲ့ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပိုငျးမှာလညျး အမြားကွီးပွောငျးလဲနိုငျမယျလို့ယုံကွညျကွောငျးလညျး အမြိုးသမီး အရေး လှုပျရှားသူတှကေ ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/411923
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျဦးမွို့မှ ငှတေောငျပေါကျတံတားအနီးတှငျ စကျတငျဘာလ ၂၀ ရကျ၊ ည ၈ နာရီ အခြိနျက ဒသေခံ နှဈဦး သနေတျဖွငျ့ပဈခတျခံခဲ့ရကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှသိရသညျ။ ၎င်းငျးတို့နှဈဦးမှာ မွောကျဦးမွို့ ဘီးလူးကနျရပျကှကျနေ ဦးထှနျးထှနျးမွငျ့ ၃၄ နှဈနှငျ့ ဆငျခဆြိပျရပျကှကျနေ ဦးထှနျးငွိမျး ၃၃ နှဈတို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မွောကျဦးဆေးရုံကွီးရှရှေိ့ မွောငျ၌ ငါးမွုံးထောငျပွီးအပွနျ ငှတေောငျပေါကျတံတားအနီးအရောကျတှငျ စဈဆေးရေးဂိတျမှ သနေတျဖွငျ့ ၈ ခကျြပဈခတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ဒဏျရာရရှိသှားသူ ဦးထှနျးထှနျးမွငျ့က ပွောသညျ။“ကြှနျတော့ပေါငျကို ကညျြထိတော့ လဲကသြှားပွီး ထလို့မရလိုကျတော့ဘူး။ အဲ့မှာကနြေျာ့ကလှိမျ့ပွီးတော့ ခြောငျးထဲကိုရောကျသှားတာပါ။ ကြှနျတော့ ညီကိုတော့ချေါသှားကွတယျ။ သူ့အျောသံကိုလညျး ကွားလိုကျရတယျ။ ရိုကျတဲ့အသံတှကေိုလညျး ကြှနျတော့ နားနဲ့ ကွားလိုကျတယျ”ဟု ဦးထှနျးထှနျးမွငျ့က ဆိုသညျ။
မွောကျဦးမွို့နယျပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးသာစိနျက ငှတေောကျပေါကျတံတားအနီးတှငျ ပဈခတျမှုဖွဈ ပှားခဲ့ပွီး အသေးစိတျကို မသိရှိသေးကွောငျး ပွောသညျ။ အဆိုပါဖွဈစဉျတှငျ ဖမျးဆီးခံထားရသူနှငျ့ပတျသကျပွီး မွောကျဦးမွို့မရဲစခနျးအား DMG က ဆကျသှယျ မေးမွနျးခဲ့သျောလညျး ဖုနျးစကျပိတျထားသဖွငျ့ အဆကျအသှယျမရရှိခဲ့ပါ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75665
ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID-19 (ချေါ) ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါမွနျမာနိုငျငံတှငျကူးစကျမူ့မွငျ့မားလာခွငျးကွောငျ့ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲ မဲပေးရာတှငျ ကူးစကျမူမရှိစရေနျ ပွငျဆငျလကျြရှိကွောငျး ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲအတှငျးရေးမူး ဦးလငျးကြျောက ပွောသညျ။ ခငျြးပွညျနယျတှငျ ကူးစကျမွနျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ(ဈ) ကူးစကျမူပွနျဖွဈပှား လာခွငျးကွောငျ့ခငျြးပွညျနယျအတှငျး ပွငျဆငျမူမေးမွနျးခွငျးကို ဦးလငျးကြျောက ပွနျလညျဖွကွေားခွငျးဖွဈသညျ။
ဦးလငျးကြျော ”ကြှနျတျောတို့ ဘကျကတော့ မဲရုံပိုငျးနဲ့ မဲရုံတာဝနျကတြဲ့သူ အပိုငျးကို ပွငျဆငျတာပေါ့၊ ပစ်စညျးပိုငျးက တော့ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျပျေါ မူတညျမယျ၊ မဲဆန်ဒရှငျ ၁၀၀ ရှိတဲ့နရောဆိုရငျ ပုံမှနျအတိုငျး ဆိုဒျတဈဆိုဒျနဲ့ လုပျဆောငျသှားမယျ၊ ပွီးတော့ ၁၀၀ နဲ့ ၅၀၀ ကွားဆိုရငျတော့ အခနျးကယျြတဲ့နရောကို ရှေးပွီးတော့ ဆိုဒျ ၂ ဆိုဒျ လုပျဆောငျသှားမယျ၊ အဲ့ဒီအတှကျ အခနျးကယျြနဲ့ နရောကယျြကို ရှေးခယျြသှားမယျ၊ ဆိုဒျ နှဈ ဆိုဒျလုပျမယျ၊ မဲပေးတာ လညျး မွနျမှာပေါ့“ ဟု ပွောသညျ။
” ၂၀၁၅ မှာတုနျးကတော့ ၁၀၃၁ ရုံထိမဲရုံတှေ လုပျဆောငျတယျ၊ အခု ၂၀၂၀ လကျရှိအနအေထားမှာကတော့ ၁၁၁၄ ရုံထိပွငျဆငျထားတယျ၊ ရဲဌာနကနေ ဘယျလောကျထိ ကူညီပေးမလဲဆိုတော့ မသိဘူး၊ ဒါပမေဲ့ အထဲမှာ ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွုတဲ့သူတှကေတော့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးအထောကျအကူပွုကတော့ အသေးစိတျ ဆှေးနှေး ပွီးပွီ၊ သူတို့ကတော့ မဲရုံကိစ်စတှကေို အကုနျလုံးစီမံပေးမယျ၊ ဟု ဆိုသညျ။ လာမညျ့ ၂၀၂ဝခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ပါတီစုံအထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ခငျြးပွညျနယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ထုတျပွနျခကျြအရ မဲပေးပိုငျခှငျ့ ရှိသူ မဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၃၄၀၀၀၀ ကြျောရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75672
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျး မကွာသေးမီက ရောကျရှိလာကွသော စဈရှောငျ တဈထောငျနီးပါးအတှကျ အရေးပျေါ အကူအညီမြားလိုအပျနသေညျဟု အကူအညီပေးနသေူမြားက ပွောသညျ။ ကြောကျတျောမွို့နယျက မဟာမုနိ ဘုရားဝနျးအတှငျး ကြေးရှာပေါငျး ၆ ရှာက စဈရှောငျ တဈထောငျနီးပါး ရောကျရှိနပွေီး ၎င်းငျးတို့အတှကျ စားနပျရိက်ခာ၊ COVID-19 ကာကှယျရေး အသုံးအဆောငျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ယာယီတဲမြားဆောကျလုပျရနျအတှကျ အကူအညီမြား လိုအပျနေ သညျဟု စဈရှောငျမြားအား ကူညီနေ သူ မြားက ပွောသညျ။
“လူဦးရေ တဈထောငျဝနျးကငျြပေါ့၊ ၉၄၃ ဦးလို့တော့ ပွောတယျ။ အခုရောကျနတောက မဟာမုနိ ဓမ်မာရုံရယျ၊ မဟာမုနိ ပုရဝုဏျအတှငျးမှာ။ မြောကျတောငျ၊ သာစညျရယျ၊ ရှပွေညျသဈ၊ ရှပွေညျရှာဟောငျး၊ အလယျကြှနျး၊ ကြောကျဂူစုရှာ အဲ့က လူတှပေဲ။ သူတို့က နရောက ကပျြသညျးမှုတှရှေိနတေယျ။ လူကမြားတယျလေ။ ပွီးတော့သူတို့ အခု စားနပျရိက်ခာ လိုတယျ။ ပွီးတော့ COVID-19 အတှကျ အထောကျအကူပစ်စညျးတှေ လိုအပျနတေယျ။ သူတို့ ဒီကိုရောကျနတော နှဈပတျကြျောပွီ” စဈရှောငျမြားအား ကူညီပေးနသေူ ကြျောတျောမွို့ က ဒသေခံတဈဦးက ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ “လိုအပျတာက စားနပျရိက်ခာရယျ၊ ဆေးဝါးပစ်စညျးတှေ လိုတယျ။ လောလောဆယျက COVID ကာလလညျး ဖွဈတော့ ပိုပွီး လိုအပျတာပေါ့။ Mask တို့ ဘာတို့လိုတာပေါ့။ ဘုနျးဘုနျးတို့က စားဝတျနရေေး၊ နစေရာမရှိ အဲ့လိုဖွဈနတေော့ ကူညီထားတာပါ။ အစကတော့ ဓမ်မာရုံမှာထားတယျ။ မဆံ့တော့ နောကျ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှမှော အဲ့နားက မဟာမုနိ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ထားတယျ။ နောကျဓမ်မရုံ သုံးရုံမှာ မြှပွီးတော့ ထားပါတယျ။ အခကျအခဲက နရောထိုငျခငျးအခကျ အခဲဖွဈတယျ။ နောကျပွီး အဝတျအထညျ အခကျအခဲရှိတယျ”ဟု စဈရှောငျမြားအား ယာယီကူညီရေးကျောမတီ၏ နာယက ဆရာတျော ဦးပညာသီရိ က မိနျ့ကွားသညျ။
အဆိုပါ စဈရှောငျမြားမှာ အနီးအနားတှငျ တဈစုံတဈရာ တိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျးမရှိပဲ ကြေးရှာမြားထဲသို့ တပျမတျော စဈကွောငျးက ဝငျရောကျလာပွီး ဖမျးဆီးစဈဆေးခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ စဈဘေးလှတျရာသို့ ထှကျပွေးလာကွခွငျး ဖွဈသညျဟု အခငျးဖွဈပှားစဉျ ဒသေခံမြားအား ဆကျသှယျမေးမွနျးရာတှငျ ပွောဆိုခဲ့သညျ လကျရှိ မဟာမုနိဘုရားဝနျး အတှငျးရောကျရှိနသေော စဈရှောငျအမြားစုမှ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ သာစညျ ကြေးရှာအုပျစုထဲက ကြေးရှာအခြို့မှ ဒသေခံ ရှာသားမြား ဖွဈကွပွီး အခြို့မှာ သွဂုတျလ ၃၁ ရကျနကေ့ ရှပွေညျဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှငျ တပျမတျောက ဖမျးဆီး စဈဆေး ခံခဲ့ရသူမြား ဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-75621
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသညျ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၉၂ ပါတီရှိသညျ့အနကျ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျး အတာဖွငျ့ မဲဆန်ဒနယျ တဈထောငျကြျော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ပါတီ သုံးပါတီသာ ရှိပွီး ပါတီ ၅၀ ကြျောက မဲဆန်ဒနယျ ၁၀ နရော ထကျ ပိုမိုယှဉျပွိုငျခွငျး မရှိဟု ပွညျထောငျစု ရှေးကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွားသညျ။
စကျတငျဘာ ၂၀ ရကျက ပွုလုပျသညျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနှငျ့ သတငျး မီဒီယာမြား အခနျးကဏ်ဍ အှနျလိုငျး ဆှေးနှေးပှဲတှငျ The Daily Eleven သတငျးစာ၏ မေးမွနျးမှုအပျေါ ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျက ယငျးသို့ ပွနျလညျဖွကွေား ခွငျးဖွဈသညျ။“တကယျတမျး တဈထောငျကြျော ဝငျတာက သုံးပါတီပဲ ရှိပါတယျ။ အဲတော့ ပါတီပေါငျး ၉၂ ပါတီ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျတယျဆိုသျောလညျး ပါတီအမြားစုက နရောအနညျးတှပေဲ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတာ တှရေ့တယျ”ဟု ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက ပွောကွားသညျ။နိုငျငံရေးပါတီတဈခုသညျ ပါတီတညျ ထောငျပွီးနောကျ အနီးစပျဆုံးရှေးကောကျ ပှဲတဈခုတှငျ မဲဆန်ဒအနညျးဆုံး သုံးနရော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရမညျ့ ဥပဒကေနျ့သတျခကျြရှိရာ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲကို မဲဆန်ဒ နယျ ၁၀ နရော အမြားဆုံး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျသညျ့ ပါတီ ၅၁ ပါတီရှိကွောငျး ၎င်းငျးက ပွောကွားသညျ။
ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ စာရငျးအရ တညျဆဲနိုငျငံရေးပါတီ ၉၄ ပါတီ ရှိသျောလညျး ကျောမရှငျညှနျကွား ခကျြမြား နှငျ့အညီ ဆောငျရှကျထားခွငျး မရှိ၍ ယာယီဆိုငျးငံ့ပွဈဒဏျခမြှတျခံရပွီး ရှေးကောကျပှဲ ယှဉျပွိုငျနိုငျခွငျးမရှိသညျ့ ပါတီအခြို့ရှိကွောငျးသိရသညျ။ ကျောမရှငျစာရငျးမြားအရ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးဦးရေ အမြားဆုံး ယှဉျပွိုငျသညျ့ ပါတီသုံးခုမှာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီ၊ ညီညှတျသောဒီမိုကရကျတဈပါတီ (UDP) နှငျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ (USDP) တို့ဖွဈသညျ။ NLD ပါတီနှငျ့ UDP ပါတီမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၁၄၃ ဦးဖွငျ့ ကိုယျစားလှယျ လောငျးဦးရအေမြားဆုံး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျပွီး USDP ပါတီမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၁၁၂၉ ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/193299